သိစိတ်နှင့်သတိမရှိသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်များ - သူတို့သည်အပြာစာပေအသုံးပြုမှုနှင့်ကွဲပြားသလား။ (2017) - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
အသုံးချသိပ္ပံ, 2017, 7(5), 493; Doi:10.3390 / app7050493
Sajeev Kunaharan 1, Sean Halpin 1, Thiagarajan Sitharthan 2, Shannon Bosshard 1 နှင့်ပေတရု Walla 1,3,4,*
1စိတ်ပညာ၏ကျောင်း, Translational အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးသုတေသနနယူးကာဆယ်တက္ကသိုလ် Callaghan 2308, NSW, သြစတြေးလျအဘို့အရေးစင်တာ
2ဆစ်ဒနီဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်း, ဆစ်ဒနီ, ဆစ်ဒနီ 2006, NSW, သြစတြေးလျတက္ကသိုလ်
3သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲခန်း (CanBeLab)၊ စိတ်ပညာဌာန၊ Webster Vienna ပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်၊ Palais Wenkheim, 1020 Vienna, Austria
4စိတ်ပညာဌာန, ဗီယင်နာတက္ကသိုလ်, 1010 ဗီယင်နာ, သြစတြီးယား
စာပေးစာယူ: လျ .: + 43-1-2699-293
ပညာရေးဆိုင်ရာအယ်ဒီတာ: Takayoshi Kobayashi
Received: 1 မတ်လ 2017 / လက်ခံထား: 26 ဧပြီလ 2017 / Published: 11 မေလ 2017
တိုးမြှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ဘို့ခွင့်ပြုနည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေနဲ့ကြိုးမဲ့ကိရိယာများစွာသောလူကနေတဆင့် access ကို၏ဆွေမျိုးလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူခေတ်ပြိုင်လူ့အဖှဲ့အစညျး၏အင်္ဂါရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တိုးမြှင့်ညစ်ညမ်းထိတွေ့ယေဘုယျစိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြောင်းအလဲနဲ့ပြောင်းလဲပါသလား? ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏ဧရိယာ၌သုတေသနသတိ Self-အစီရင်ခံစာအစီအမံအပေါ်အကြီးအကျယ်မှီခိုသည်။ သို့သော်အသိပညာတိုးပွားလာသဘောထားများနှင့်စိတ်ခံစားမှုကျယ်ကျယ်ကြိုတင်သတိအကဲဖြတ်ဖို့ non-သတိအဆင့်တွင်လုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဒါကွောငျ့ဒီရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးလေ့လာမှုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေ Non-သတိနှင့် / သို့မဟုတ်သတိစိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်များတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရည်ရွယ်။ ညစ်ညမ်းအမျိုးမျိုးပမာဏကြည့်ရှုသတင်းပေးပို့သူကိုသင်တန်းသားများကို (N ကို = 52) စိတ်ခံစားမှု inducing ပုံရိပ်တွေနှင့်အတူတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ဦးနှောက် Event-Related အလားအလာ (ERPs) မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်နှင့်တုန်လှုပ် reflex Module (SRM) Non-သတိစိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်များဆုံးဖြတ်ရန်လျှောက်ထားခဲ့သည်။ တင်ပြချင်းစီပုံရိပ်ကိုအဘို့ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ valence နှင့် arousal ratings ကိုလည်းသတိစိတ်ခံစားမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများဆုံးဖြတ်ရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ သတိရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ratings ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပေါ် မူတည်. "ခေါ်ဆောင်သွား" ကိုရိုသေလေးစားမှုနှင့် "သာယာသော" valence (သာယာသော) ratings နှင့်အတူသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုဖော်ပြခဲ့တယ်။ SRM အရေးပါမှုနှင့် ERPs ချဉ်းကပ်သက်ရောက်မှုစပ်လျဉ်းအတွက်ဦးနှောက်၏တိုကျရိုကျနှင့် parietal ဒေသများတွင်အပြောင်းအလဲများကို "မနှစ်မြို့ဖွယ်" ရန်နှင့်အကဲဆတ်သော ratings တွင်တွေ့မြင်ကွဲပြားမှုနှင့်အတူမပတျသကျဘူးပေးသော "အကြမ်းဖက်" စိတ်လှုပ်ရှားမှုရုပ်ပုံအမျိုးအစား, ပြသခဲ့သည်ပြသခဲ့သည်။ တွေ့ရှိချက်များကိုတိုးမြှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ Self-အစီရင်ခံစာအားဖြင့်မပြသခဲ့သည့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု-inducing လှုံ့ဆော်မှုဖို့ဦးနှောက်ရဲ့ Non-သတိတုံ့ပြန်မှုတခုတခုအပေါ်မှာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ဖို့ပေါ်လာအကြံပြုအပ်ပါသည်။
Non-သတိဖြစ်စဉ်များနှိုင်းယှဉ်သတိ; ညစ်ညမ်း; စိတ်လှုပ်ရှားမှု; အကျိုးသက်ရောက်စေတုံ့ပြန်မှု; EEG; တြိဂံဖွဲ့
1.1 ။ Access ကိုလွယ်ကူ
အများပြည်သူသုံးစွဲမှုအတွက်အွန်လိုင်းရရှိနိုင်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းတစ်ခုအစဉ်အဆက်-တိုးမြှင့်ငွေပမာဏ [ရှိပါတယ်1,2] ။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမရှိခြင်း [အင်တာနက်ကိုလျင်မြန်စွာဖြန့်ဝေ, ညစ်ညမ်းပစ္စည်းဖြန့်ဝေနိုင်သည့်ကလွယ်ကူပြီးထိရောက်မှုနည်းလမ်းဖြစ်လာနှင့်တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်နေအိမ်အတွင်းစားသုံးမှုများအတွက်ရရှိနိုင်ပါ, အသုံးပြုနိုင်စွမ်း, အမည်ဝှက်နှင့်တတ်နိုင်၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတူမူကြောင်းကိုဆိုလိုတယ်3,4] ။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောစမတ်ဖုန်းများ, Wi-Fi နှင့်မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအဖြစ်နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေအဟောင်းတစ်စားပွဲခုံမှ tethering ဖြစ်ရှိခြင်း၏ပြဿနာနှင့်ကေဘယ်လ်မရှိတော့ညစ်ညမ်းပစ္စည်းကြွယ်ဝအမျိုးမျိုးဝင်ရောက်ဖို့တဦးတည်းရဲ့စွမ်းရည်ကိုကန့်သတ်ဆိုလို။ Unsurprisingly, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကြည့်ရှုရန်နှငျ့ပတျသကျသောပြဿနာများ [မကြာသေးမီကာလ၌အသုံးအများဆုံးမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်လာကြပါပြီ5]
1.2 ။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်၎င်း၏အပြုအမူအကျိုးသက်ရောက်မှု
အများအပြားကလေ့လာမှုများ [တစ်ဦးချင်းစီသိမြင်မှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ်, ကအပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောဖြစ်, ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှုတစ်စုံတစ်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ရှိမရှိ၏အယူအဆစူးစမ်းကြပါပြီ3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15] ။ ဤအစာတမ်းများထဲကအတော်များများညစ်ညမ်းပစ္စည်းမှတိုးမြှင့်ထိတွေ့လိင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူမှဦးဆောင်ရှိမရှိများ၏ပြဿနာကိုဆန်းစစ်နေဖြင့်ဤလူ့အဖွဲ့အစည်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီ။ meta ဤလုပ်ငန်းလေ့လာဆန်းစစ် [ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုတိုးပွားလာအကြိမ်ရေလူသားတွေအတွက်အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်အစီအမံကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မပြခဲ့ကြ16,17] ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်ယေဘုယျအားဖြင့်ပျမ်းမျှတစ်ဦးချင်းထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းမှာညစ်ညမ်းအသုံးပြုဖေါ်ပြခြင်း -even  ။ Allen က et al ဖွငျ့ဖျြော Meta-analysis သည်။  စမ်းသပ်လေ့လာမှုများ (တစ်ခုတည်းကိုသာ Self-အစီရင်ခံစာအပေါ်မှီခိုမဟုတ်) သေးငယ်တဲ့ဒါပေမယ့်အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုပြသသော်လည်း (ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှုမုဒိမ်းမှုဒဏ္ဍာရီလက်ခံမှုတိုးပွါး), ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း Non-စမ်းသပ်နည်းလမ်းများနီးပါးအဓမ္မပြုကျင့်မှုဒဏ္ဍာရီများ၏ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုနှင့်လက်ခံမှုကိုအဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ပုံများအားပြသခဲ့သည်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ အခြားအ Meta-ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်သဘောထားများအကြားသိသိသာသာအပြုသဘောအသင်းအဖွဲ့စမ်းသပ်နှင့် nonexperimental နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများအတွက်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုထောက်ပံ့တွေ့ပြီ  ။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအကြမ်းမဖက်ပုံစံများကိုကျော်လိင်အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းထိတွေ့ခဲ့ကြပါလျှင်ဤရွေ့ကားဆက်စပ်မှုပိုမိုမြင့်မားခဲ့သညျ။ မန်စီနီ et al ။  လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူတစ်ဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှဆယ်ကျော်သက်ထိတွေ့မှုသိသိသာသာသားကောင်အရှက်၏ဒီဂရီ၏လမ်းဖြင့်အကြမ်းဖက်မှုများ၏မြင့်ခန့်မှန်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ စာရေးသူလည်းပဲမတိုင်မီပြစ်မှုမှညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသူတို့ကညစ်ညမ်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူအပေါ်ရှိခဲ့ပါတယ်တစ် cathartic အကျိုးသက်ရောက်မှုမှစွပ်စွဲထားတဲ့လျှော့ချသားကောင်ဒဏ်ရာအတွက်ရလဒ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းပစ္စည်းကြည့်သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်အပြုအမူအပေါ်အဘယ်သူမျှမအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုလျှင်အနည်းငယ်သာရှိကြောင်းသဘောတူဟန်အခြားသုတေသီများရှိပါတယ်။ ဖာဂူဆန်နှင့် Hartley , သူတို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များအကြားတစ်ဦးကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆက်ဆံရေးသက်သေအထောက်အထားအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ပြီးညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အကြမ်းဖက်အပြုအမူများအကြားမည်သည့်အပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်စပ်မှုမှာအကောင်းဆုံးကိုက်ညီမှုကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သူတို့ကအမူအကျင့်စွန့်ပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးတိုးပွားလာစေပါတယ်ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုတိုးပွားလာသောအယူအဆအကြံပြုအပ်ပါသည်။ မကြာခဏပြဿနာကိုရိုးရှင်းစွာဆက်စပ်မှုနှင့် causation အကြားကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ခုမရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အတော်ကြာမဟုတ်ဘဲအကြမ်းဖက်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းအကြားဖြစ်နိုင်ခြေဆက်စပ်မှုမှာရှာဖွေနေထက်အခြားလေ့လာမှုများအစားလူမှုရေးအရ, စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ် focussing စတင်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်သောလိင်ထိခိုက်သက်ရောက်မှုများ။ အလားအလာနှင့်အခြားသူများအကြားသက်ရောက်မှုအစီရင်ခံပါဝင်သည်: [စိုးရိမ်စိတ်တိုးလာ21] စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများ  နှင့်ညစ်ညမ်း၏အကူအညီမပါဘဲအစစ်အမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်နဲ့စိုက်ထူအစပျိုးထိန်းသိမ်းနည်းဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း  အလှည့်အတွက်, စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်-related မမှန်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သော။
ဒါဟာမကြာခဏအချို့အပြုအမူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့နေမကောင်းသက်ရောက်မှု၏ဆက်စပ်မှုကြောင့်အထူးသဖြင့်အပြုအမူအဆုံးသတ်ပိတ်ပစ်စေခြင်းငှါအရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုအကြောင်းမရှိစေခြင်းငှါလွှတ်သို့သော်ကြောင့်သေချာပေါက် causation ညွှန်ပြမထားဘူးသည်။ ဒါကြောင့် (တခြားအပျော်အပါး-ရှာကြံအပြုအမူတွေနဲ့အတူကဲ့သို့) ညစ်ညမ်း၏တိုးလာကြည့်အများအပြားကဆောငျရှကျစေခြင်းငှါ, ကဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူတင်ပြသူကိုတစ်ဦးချင်းစီ၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ဤနေမကောင်းဆိုးကျိုးများ၏ဆက်စပ်မှုယူဆမရနိုင်သည်ကိုနားလည်ပေမဲ့ ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုမှုနှင့်အတူ causation ကိုဆိုလိုသည်။
1.3 ။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏ဇီဝကမ္မအကျိုးသက်ရောက်မှု
အဖြစ်အပျက်-related အလားအလာ (ERPs) မကြာခဏ [ဥပမာ, စိတ်ခံစားမှုတွေကိုမှတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဇီဝကမ္မအတိုင်းအတာအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြ24] ။ ERP data တွေကိုအသုံးချဖို့လေ့လာရေး [ထိုကဲ့သို့သော P300 အဖြစ်နောက်ပိုင်းမှာ ERP သက်ရောက်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လေ့14] နှင့်နှောင်းပိုင်း-အပြုသဘောဆောင်သောနိုင်သည့်အလားအလာ, (LPP) [7,8] ညစ်ညမ်းရှုမြင်တဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီအားစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်အခါ။ အဆိုပါ ERP waveform ဤနောက်ပိုင်းတွင်ရှုထောင့် [ဤကဲ့သို့သောအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဉာဏ် (P300) အဖြစ်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များမှစွပ်စွဲခဲ့ကြ25] အဖြစ်စိတ်ခံစားမှု-သက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (LPP) ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်  ။ သံမဏိ et al ။  ကြားနေပုံရိပ်တွေမှဆွေမျိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကြည့်ရှုအကြားမြင်ပြီကြီးမား P300 ကွဲပြားခြားနားမှုအဆိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အတိုင်းအတာနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကွောငျးတငျပွခဲ့သနှင့်သင်တန်းသားများကို '' hypersexuality မသက်ရောက်ခဲ့ရသည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာကဒီအနုတ်လက္ခဏာတွေ့ရှိချက်ကြောင့်ပါဝင်သူရေကူးကန်မှမဆိုဝတ္ထုအရေးပါမှုရှိခြင်းမဟုတ်ပြထားတဲ့ပုံရိပ်တွေဆုံးဖြစ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းအကြံပြု, သင်တန်းသားများအဖြစ်အားလုံးအကျိုးဆက်ကတော့ P300 အစိတ်အပိုင်းများ၏ဖိနှိပ်မှုမှဦးဆောင်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းမြင့်မား volumes ကိုကြည့်ရှုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကအညွှန်းကိန်းလှုံ့ဆျောမှုဖြစ်စဉ်များမှပြသခဲ့ပြီးအဖြစ်စာရေးဆရာများဖြစ်ကောင်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ် LPP မှာရှာဖွေနေကြောင်းအကြံပြုအပေါ် သွား. , တစ်ဦးထက်ပိုအသုံးဝင်သော tool ကိုပေးလိမ့်မည်။ အဆိုပါ LPP အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုထားပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးလေ့လာရေး [ညစ်ညမ်းပစ္စည်းကသူတို့ကြည့်ထိန်းညှိပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ပြဿနာများရှိခြင်းသတင်းပို့တဲ့သူသင်တန်းသားများကိုအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်သေးငယ်ဖြစ်ဖို့ LPP လွှဲခွင်ကိုပြသကြ7,8] ။ မြောက်မြားစွာသည်အခြားစွဲ-related လေ့လာမှုများတစ် cue-related စိတ်လှုပ်ရှားမှုတာဝန်နှင့်အတူတင်ပြသည့်အခါပြသကဲ့သို့ဤရလဒ်ကသူတို့သတ်သတ်မှတ်မှတ်စွဲ-inducing ပစ္စည်းဥစ္စာသူတို့ရဲ့စှဲလေ့ပိုကြီး LPP waveforms ပြတင်ဆက်သည့်အခါပုံရိပ်တွေညှိနှိုင်းပြဿနာများရှိခြင်းသတင်းပို့တဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီ, မမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်ပါတယ်  ။ Prause et al ။ [7,8] ညစ်ညမ်းပစ္စည်းသုံးရင်သတင်းပို့လေ့လာမှုရှိသူတို့တက်ရောက်လာသူများကိုညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသုံးစွဲနာရီပမာဏကိုသိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားသွင်းယူအဖြစ်ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုပြုလုပ်ကြောင့်လေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမှဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုခြင်းအားဖြင့်သေးငယ် LPP ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေမည်အဘယ်ကြောင့်ရန်အဖြစ်ကမ်းလှမ်းမှုအကြံပြုချက်များ ပစ္စည်း။
ERPs မတူဘဲ, ဥပမာတုံ့ပြန်မှုမော်ဂျူ (SRM) လည်းကုန်ကြမ်းကိုထိခိုက်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့နှငျ့ပတျသကျသောသတငျးအခကျြပေးစိတ်လှုပ်ရှားမှုသုတေသနများတွင်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်သောဤလယ်ပြင်၌တစ်ဦးအတော်လေးသစ်ကို technique ကိုတစ်ခုဖြစ်သည် startle  ။ SRM ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာမျက်စိ Blink ၏ပြင်းအားကိုတိုင်းတာဖို့ဖြစ်ပါတယ်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်လူတစ်ဦးထိခိုက်စေအကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးနှင့်အတူထိန်းချုပ်ထား foreground ဆွထိတွေ့နေစဉ် [အသံကျယ်အာရုံအဖြူဆူညံသံတစ်ခုမမျှော်လင့်ဘဲပေါက်ကွဲပြီးနှင့်အတူရူးနှမ်း28] ။ lang et al ။  မျက်စိမှိတ်ပြင်းအားအဆင့်ကတော့မျှော်လင့်မထားတဲ့အာရုံဟာဆွေမျိုးစာစားချင်စိတ်ကိုဆက်နွယ်နေကြောင်းလှုံ့ဆော်မှု (သေးငယ်မျက်စိ Blink အတွက်ရရှိလာတဲ့) သို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိ (ပိုကြီးတဲ့မျက်စိ Blink) ကအမြင်အာရုံတင်ပြလှုံ့ဆော်မှုများအပေါ်သက်ရောက်မှုအကြောင်းအရာကမှတ်တမ်းတင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှစ်မြို့ဖွယ်သို့မဟုတ်၌လည်းကြောက်မက်ဘွယ်သောလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူတင်ပြခြင်းနှင့်သာယာသောလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူတင်ပြသည့်အခါလျော့နေသည်အခါထိတ်လန့်အာကာသယာဉ်နဲ့ဆက်စပ်မျက်စိ Blink တိုးမြှင့်နေကြသည်ဖြစ်ပါသည်။
မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများ [psychopathy အပါအဝင်ကွဲပြားအခင်းအကျင်း, စပ်လျဉ်းကုန်ကြမ်းကိုထိခိုက်အပြောင်းအလဲနဲ့တစ်အတိုင်းအတာအဖြစ်ထိတ်လန့်တုံ့ပြန်မှုမော်ဂျူမိတ်ဆက်ပါပြီ30] မျိုးစုံမသန်စွမ်း  အနံ့  schizophrenia , ထုတ်ကုန်ပုံစံ  မြို့ပြရပ်ကွက်မှတစ်ဆင့်လမ်းလျှောက်  နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုင်ဆိုင်မှု  ။ SRM လည်း [စားသုံးသူ neuroscience မှမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်37,38,39,40] ။ သို့သျောလညျး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့၌ဤမှတ်တမ်းတင်အတိုင်းအတာများအသုံးပြုခြင်း [ရှားပါးခဲ့41] ။ တသမတ်တည်းဖျော်ဖြေခဲ့ကြရာလေ့လာရေး [ကြားနေမနှစ်မြို့ဖွယ်ဖေါ်ပြခြင်းပုံရိပ်တွေမှဆွေမျိုးအပြုသဘော (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ) ကးပုံဖော်ပုံရိပ်တွေရန်လျှော့ချထိတ်လန့်မျက်စိမှိတ်တုံ့ပြန်မှု, ပြသ42] ၌လည်းကြောက်မက်ဘွယ်သော  အကြောင်းအရာ။ 2014 ခုနှစ်, SRM [လက်ရှိလေ့လာမှုအတိအကျဆက်စပ်အတွက်အသုံးပြုရန်အကြံပြုခဲ့သည်44].
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုပုံမှန်လူဦးရေအတွင်းညစ်ညမ်းစားသုံးမှုပမာဏကွဲပြား Non-သတိစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များအဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုမသိ Self-အစီရင်ခံစာအစီအမံအပေါ်တစ်စုံတစ်ရာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန် neurophysiological အစီအမံ (EEG နှင့် SRM) သုံးစွဲဖို့ရည်ရွယ်သည်။
1.4 ။ self-အစီရင်ခံစာ
self-အစီရင်ခံစာမေးခွန်း [မကြာခဏသည်အခြားနည်းစနစ်များဖယ်ရန်, ပွဲတစ်ပွဲသုတေသီများနှင့် Clinician ညစ်ညမ်းပစ္စည်းအသုံးပြုသူများအအတွင်းစိတ်ခံစားမှုသဘောထားများနှင့်အပြုအမူသိရှိနိုင်ရန်ကြိုးစားသောအသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းရှိပါတယ်45,46] ။ Self-အစီရင်ခံစာမေးခွန်းကျယ်ပြန့်သောလူဦးရေကိုကျော်ဒေတာပမာဏစုဆောင်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုငျသျောလညျးသူတို့, လူမှုရေးလိုလားဘက်လိုက်မှုဘက်လိုက်မှုမှတ်မိဖို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်များမှာ [13,45,47] နှင့်သိမြင်မှုညစ်ညမ်းမှု  ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြောင်းအလဲနဲ့ Non-သတိ, subcortical ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံအဖြစ်သတိ cortical အဆောက်အဦများနှင့်စပ်လျဉ်းအစိတ်အပိုင်းများရှိသည်ဖို့ပြသလျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ရှုထောငျ့ [သတိအသိပညာမပါဘဲတည်ရှိနိုင်ပါတယ်38,49,50,51] ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတစုံတခုကိုမှရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအဖြေကိုပေးနိုင်စွမ်းအနေနဲ့အကဲဖြတ်မှုအရာသတိသိမြင်အပြောင်းအလဲနဲ့တစ်ဦးအဆင့်ကိုလိုအပ်သည်။ ဤသည်သိမြင်မှုအကဲဖြတ်သို့သော် ပို. သတိ cortical ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲနဲ့အတူ coupled ဦးနှောက်ထဲမှာ subcortically ဖြစ်ပေါ်ရသောနက်ရှိုင်းဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များပေါင်းစပ်၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါက [တဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်းသိမြင်ညစ်ညမ်းမှုအဖြစ်ရည်ညွှန်း, နောက်ခံဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှုမသိအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရာဆွဲပြခဲ့ပြီး48] ။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစီရင်ခံစာအတိုင်းအတာအားဖြင့်သက်သက်သာဝယ်ယူဒေတာတခုတခုအပေါ်မှာ overreliance အမှန်တကယ်တစ်ဦးချင်းရဲ့အတွေးဖြစ်စဉ်များတစ်ခုတိကျကိုယ်စားပြုမှုရယူမထားဘူးတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီချို့ယွင်းချက်များအတွက်အကောင့်ရန်, လက်ရှိလေ့လာမှုအတွက်စာရေးဆရာများရိုးရာအစီအမံ (ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးတြိဂံဖွဲ့ချဉ်းကပ်မှုအတိုင်းလိုက်နာရန်) အပြင် Non-သတိဖြစ်စဉ်များသိရှိနိုင်ရန်မှဇီဝကမ္မအစီအမံအသုံးချဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ cortical ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုကိုတိုင်းတာနှင့် cortical နှင့် sub-cortical ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံကနေညှိနှိုင်းသတင်းအချက်အလက်ကပါဝင်ပတ်သက်ရသော electroencephalography (EEG), အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Sub-cortical ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်တိုင်းတာသည် non-သတိကုန်ကြမ်းကိုထိခိုက်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့ဆက်စပ်ပေးသောတုန်လှုပ် reflex Module (SRM), လမ်းဖြင့် Electromyography (EMG), ထို့အပြင်ရိုးရာ Self-အစီရင်ခံစာအစီအမံ (စစ်တမ်းကောက်မေးခွန်းများအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အကြေးနှင့်အတူအသုံးပြုသွားမည်ခဲ့သည် ) အရာ cortical သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့ပတျသကျတဲ့တိုင်းတာ, Higher-အလို့ငှာသိမြင်တုန့်ပြန်လိုအပ်သည်။ ဤသုံးပါးနည်းလမ်းများသင်တန်းသားများကို '' Non-သတိဇီဝကမ္မပြည်နယ်နှင့်သတိတုံ့ပြန်မှုအတွက်မဆိုကွဲပြားခြားနားမှု triangulate ဖို့နဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်သို့အသာပုတ်ပါအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ငါးဆယ်နှစ်ယောက်အထီးသင်တန်းသားများကိုနယူးကာဆယ်လ်တက္ကသိုလ်ရဲ့စမ်းသပ်စီမံခန့်ခွဲမှု SONA ကိုခေါ်စနစ်, နှုတ်, ဒါမှမဟုတ် Flyer ကနေတဆင့်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ သင်တန်းသားများကိုအားလုံး 18 နှင့် 30 နှစ်အကြားနယူးကာဆယ်, သက်ကြီးရွယ်အိုသြစတြေးလျတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ (; SD က = 21.1 M က = 2.9) တို့ဖြစ်သည်။ အားလုံးသင်တန်းသားများကိုစာဖြင့်ရေးသားအသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်ပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါပါဝင်စံ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, သင်တန်းသားများကိုပြည့်စုံရှင်းလင်းစွာညာသန်, သူတို့ကလိင်ကွဲခဲ့ဖော်ပြထားပုံမှန် / သာမန်ရူပါရုံတညျ့ခဲ့သောလေ့လာမှုသို့စုဆောင်း neuropathological / စိတ်ရောဂါနာမကျန်းမရှိသမိုင်းခဲ့ဆေးဝါးများသို့မဟုတ်တ္ထုများထိခိုက်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်၏လွတ်ကြ၏ , ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ / လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုတစ်သားကောင်ဖြစ်ခြင်းမရှိသမိုင်းခဲ့ကာ penitentiary အတွက်အကျဉ်းခံမရှိသမိုင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ သင်တန်းသားများကိုဖြစ်စေငွေရေးကြေးရေးသူတို့ရဲ့အချိန်များအတွက် reimbursed သို့မဟုတ်သင်တန်းကရက်ဒစ်နှင့်အတူချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။ အမျိုးသမီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တစ်ဦးထက်ပိုတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းနမူနာလူဦးရေတင်ပြဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ အစဉ်အလာ, အထီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံလက်ရှိလေ့လာမှုအဘို့ခဲ့ပါတယ်ဘယ်မှာ သို့ဖြစ်. အပန်းဖြေရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အဘို့အအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းထွက်ရှာပိုပြီးဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ အဆိုပါလေ့လာမှုနယူးကာဆယ်လူ့သုတေသနကျင့်ဝတ်ကော်မတီမှတက္ကသိုလ် (H-2013-0309,5ဒီဇင်ဘာလ 2013) ကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
2.2 ။ ဆောင်ရွက်ချက်များ
ဤလေ့လာမှု၏ကနဦးအစိတ်အပိုင်းတခုချင်းစီပါဝင်သူထံမှသတိစိတ်လှုပ်ရှားမှုတုံ့ပြန်မှုအကဲဖြတ်ရန်အွန်လိုင်းမေးခွန်း၏အသုံးပြုမှုကိုပါဝင်ပတ်သက်နေ။ အွန်လိုင်းမှစစ်တမ်း Lime စစ်တမ်းကို အသုံးပြု. ဖန်တီးခဲ့ , အရေးဆွဲပြီးအုပ်စုများ၏တစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့ Self-အစီရင်ခံ Impulse ရမှတ်များအတွက်ကွဲပြားရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်လူဦးရေဆိုင်ရာမေးခွန်းများကို, အ Buss-Durkee ရန်လိုမုန်းတီးမှု Inventory (BDHI), Barratt Impulse စကေး (bis-11) ပါဝင်သည်ရာ; အဆိုပါ Snyder ကိုယ်ပိုင်စောင့်ကြည့်စကေး  အရာတစ်ခုချင်းစီကိုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာသူတို့ရဲ့ Self-တင်ပြချက်များစောင့်ကြည့်ဖို့အတိုင်းအတာဆုံးဖြတ်ရန်; ညစ်ညမ်းကြည့်အပြုအမူစာရေးသူအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအများအပြားပစ္စည်းများပါဝင်သည်ဟုအဖြစ် Harkness et al ထံမှပစ္စည်းများကိုထည့်သွင်းဆိုင်သောနေရာများတွင်တစ်ဦးရည်ရွယ်ချက်-built မေးခွန်းလွှာ။  ။ 18 နှင့် 30 နှစ်ပေါင်းနှစ်ကြားသာလိင်ကွဲသင်တန်းသားများမေးခွန်းလွှာဖြည့်စွက်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မီခဲ့ကြသည်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဇီဝကမ္မအစီအမံဖြည့်စွက်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစစ်တမ်းကိုဖြည့်စွက်ဖို့ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 20-25 မိကိုယူ။
electroencephalography တစ် 64 ရုပ်သံလိုင်း BioSemi Active ကိုနှစ်ဦး system ကိုသုံးပြီးတိုင်းတာခဲ့သည် (BioSemi, အမ်စတာဒမ်, အဆိုပါနယ်သာလန်) နှင့်တုန်လှုပ် reflex Module (SRM) (စိတ်မီဒီယာ BV, Herten, အဆိုပါနယ်သာလန်ကထုတ်လုပ်) တစ်ဦးက Nexus-10 မိုဘိုင်းအသံဖမ်းစက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်နည်းပညာ၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်အဘို့, Walla et al ဖတ်ရှုပါ။ .
2.3 ။ လှုံ့ဆော်မှု
နိုင်ငံတကာကိုထိခိုက်ရုပ်ပုံစနစ် (IAPS) မှရင်းမြစ်ထားတဲ့ 150 ပုံရိပ်တွေ၏ဖွဲ့စည်းပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအဘို့အလှုံ့ဆော်မှု  ။ အဆိုပါ IAPS [လူများ, နေရာများ, တ္ထုများနှင့်ဖြစ်ရပ်များသရုပ်ဖော်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုသုတေသနအတွက်ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုသည်အရာဝန်းကျင် 1000 ပုံများ, ဥပမာတစ်ခုစံချိန်စံညွှန်းမီစုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်56] ။ အကြမ်းဖက်, ခေါ်ဆောင်သွား, သာယာသော, မနှစ်မြို့ဖွယ်များနှင့်ကြားနေ, တစ်ခုချင်းစီအုပ်စု 30 ပုံရိပ်တွေနှင့်အတူ: လက်ရှိလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်, ရုပ်ပုံများငါးအမျိုးအစားများထဲမှသို့ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။ ပုံရိပ်တွေတစ်ခုချင်းစီအမျိုးအစားဟာသူတို့ရဲ့စံတန်ဖိုး valence အတွက်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အနေဖြင့်ကွဲပြားပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကို image ကို5s အတွက်တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူပြခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုထို့နောက် valence နှင့် arousal များအတွက်သီးခြား 9-အမှတ် Likert အကြေးခွံပေါ်တစ်ဦးချင်းစီ image ကိုသတ်မှတ်ခဲ့သည်။
ငါးထိတ်လန့်စုံစမ်းစစ်ဆေးစုစုပေါင်းကျပန်း (စုစုပေါင်း5စမ်းသပ်မှုစဉ်အတွင်းစုံစမ်းစစ်ဆေး startle) စိတ်ခံစားမှုအမျိုးအစားနှုန်း 30 ဓါတ်ပုံတွေထဲက 25 ရှေးခယျြဖို့ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်။ ထိတ်လန့်စုံစမ်းစစ်ဆေး 110 dB မှာ binaurally တင်ပြခြင်းနှင့် 50 ms ၏ acoustic အဖြူဆူညံသံ၏ရှည်လျားပြီးတော့ Activision နေတာပါဝင်သည်ခဲ့ကြသည်။
2.4.1 ။ Lab ကစမ်းသပ်
အွန်လိုင်းမေးခွန်းလွှာများပြီးစီးပြီးနောက်သင်တန်းသားများကိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ဖိတ်ခေါ်ခံခဲ့ရတယ်။ သင်တန်းသားများကိုကြည့်ရှုအားပေးနှင့် IAPS ပုံရိပ်တွေ rated နေတုန်းဤသင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးစဉ်အတွင်း EEG နှင့် SRM ၏အခြေခံတိုင်းတာစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းနေတုန်း arousal နှင့် valence ၏အသုံးအနှုန်းများအတွက်လှုံ့ဆော်မှုများတစ်ဦးချင်းစီ rating သင်တန်းသားများပါဝင်ပတ်သက်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအချက်အလက်များ၏စုဆောင်းခြင်း, EEG နှင့် SRM သွယ်ဝိုက်တုံ့ပြန်မှုအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ သင်တန်းသားများကို '(resolution ကို 32 × 1024 pixels) စောင့်ကြည့် LED တစ် 768' 'များ၏ရှေ့မှောက်၌အငြိမ့်ထိုင်ခဲ့ကြသည်။ သင်တန်းသားများကိုအလားအလာအပြောင်းအလဲများကို 64 cranial လျှပ်အဖြစ် ocularly နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ထားရှိရှစ်နောက်ထပ်လျှပ် အသုံးပြု. တိုင်းတာခဲ့ BioSemi Active ကိုနှစ်ဦး EEG စနစ်နှင့်ဦးနှောက်နဲ့ချိတ်ဆက်ခဲ့ supra ocularly, Infra ocularly, နှင့် mastoids ပေါ်မှာ။ နှစျခု4မီလီမီတာ Biotrace လျှပ် (လက်ဝဲမျက်စိ၏ယုတ်ညံ့ orbicularis oculi အပေါ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 20 မီလီမီတာအကွာနှင့်အတူ) တုန်လှုပ် reflex Modulation ဘို့အပြင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်, Presentation (Neurobehavioral စနစ်များ, အယ်လ်ဘာနီ, NY, အမေရိကန်နိုင်ငံ) သင့်လျော်သောညွှန်ကြားချက်များနှင့်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုစာရင်းကိုအမြင်အာရုံပစ္စုပ္ပန်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ လှုံ့ဆော်မှုများ၏တင်ပြချက်အပေါင်းတို့နှင့် psychophysiological signal ကိုမှတ်တမ်းတင်သီးခြားအခန်းတစ်ခန်းထဲကနေကောက်ယူခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုကိရိယာအစုံတက်စဉ်အတွင်းလေ့လာမှုတစ်ခုအတိုချုပ်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပေးခဲ့သည်များနှင့်ကြိုတင်အသံသွင်းဖို့ screen ပေါ်မှာလက်မှာတာဝန်အဘို့ညွှန်ကြားချက်ကိုဖတ်ခိုင်းတယ်။ နားကြပ် (Sennheiser HD280, Wedemark, ဂျာမနီ) ကိုပါဝင်သူရဲ့နားရွက်ကျော်ထားရှိခဲ့ကြသည်များနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းအဆိုပါလှုံ့ဆော်မှုအပေါ်လုံလောက်တဲ့အာရုံစိုက်စေရန်မွဲမွံခွငျး lit ခန်းထဲမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့အားဖြင့်ပါဝင်သူနှင့်အတူစတင်။
2.4.2 ။ စမ်းသပ်မှု Task ကို
တစ်ခုချင်းစီကို IAPS image ကိုတစ်ကြိမ်5့တဦးတည်းများအတွက် screen ပေါ်မှာတင်ဆက်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီပုံရိပ်ကိုပြီးနောက်သင်တန်းသားများကိုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းစကေးပြသခဲ့ကြသည်နှင့်အ 1 နေစကေးသုံးပြီးပုံရိပ်ကို၏ valence (သာယာသော) ဘယ်လောက်ရှိသလဲဖို့တောင်း9ရန် "အလွန်သာယာသော" "ဟာအလွန်မနှစ်မြို့ဖွယ်" ။ ဒီကနဦးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြီးနောက်သင်တန်းသားများသည်အခြားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်စကေးပြသခဲ့ကြသည်နှင့် arousal ဘယ်လောက်ရှိသလဲဖို့တောင်း (ပြင်းထန်မှု) 1 နေစကေးသုံးပြီးပုံရိပ်ကို၏9ရန် "အလွန်ပြင်းထန်သော" "အလွန်ငြိမ်သက်" ။ လာမယ့် image ကိုတင်ပြမီဒီပြီးနောက်သေးငယ်တဲ့အဖြူ fixation လက်ဝါးကပ်တိုင် 1 s အတွက်အနက်ရောင်နောက်ခံပေါ်မှာထင်ရှား၏။ တစ်ဦးထိတ်လန့်စုံစမ်းစစ်ဆေးပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ coupled ခဲ့သည်ဆိုပါကထိုသို့ 4th ဒုတိယ Post-လှုံ့ဆော်မှုတင်ဆက်မှုအပေါ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဇီဝကမ္မနှင့်အကဲဆတ်သောအစီအမံများအားလုံး 150 IAPS ပုံရိပ်တွေအဘို့အခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ပုံရိပ်တွေကျပန်းနိုင်ရန်အတွက်တင်ပြခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကအတိုချိုးပင်ပန်းနွမ်းနယ်၏သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချဖို့တစ်ဝက်အမှတ်မှာပါဝင်သူကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ SRM ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘို့ဆက်နွယ်နေတဲ့ထိတ်လန့်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းသာပုံရိပ်တွေထပ်မံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအဖြစ်သူတို့သာပုံရိပ်တွေ '' ဆက်စပ်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတုံ့ပြန်မှုခဲ့ကြသည်။
2.5 ။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
2.5.1 ။ မေးခွန်းလွှာအားသုံးသပ်ခြင်းနှင့်အဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခြင်း
သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုမေးခွန်းလွှာအပေါ်နှစ်ခုကသီးခြားပစ္စည်းများသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးအုပ်စုများသို့ကွဲကွာခဲ့သည်။ "သင်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြရာအတူကြိမ်နှုန်းကဘာလဲ, နောက်ဆုံးနှစ်တွင်?" နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကို item မှအဖြေများတစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူများအတွက်သီးခြားသွင်းယူခဲ့ကြသည် "ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသည့်အခါမည်မျှအချိန်သင်တဦးတည်းဇာတ်လမ်းတွဲစဉ်အတွင်းဖြုန်းကြမည်နည်း": ဤပစ္စည်းများကိုခဲ့ကြသည် နှင့်တစ်နှစ်လျှင်ကိုလောင်ညစ်ညမ်း၏နာရီခန့်မှန်းအရေအတွက်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်များပြားလာ၏။ အဆိုပါစာရေးဆရာပိုင်းတွင်ဆောင်များတွင်အပေါ်တစ်ဦးပျမ်းမျှအုပ်စုခွဲလုပ်ဆောင်သွားခဲ့ကြသည်ပေမယ့်အများအားဖြင့်သုံးလေ့လာသူများသီးခြားအုပ်စုများသို့ပြွတ်တို့သည်ပျမ်းမျှရမှတ်များနှင့်ရမှတ်၏အကွာအဝေးပေါ်တွင်သို့မဟုတ်န်းကျင်သွင်းယူအများအပြားသင်တန်းသားများကိုရှာတွေ့ပြီးနောက်, ဒါကြောင့် "အနိမ့်" သို့အုပ်စုများကိုဝေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်, "အလယ်အလတ်" နှင့်ရမှတ်များပြန့်ပွားအပေါ်အခြေခံပြီး "မြင့်သော" အုပ်စုများ။ နည်းလမ်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအဖွဲ့ကိုကြည့်ရှုအားပေးညစ်ညမ်းတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်နာရီအရေအတွက်စံသွေဖီ ပုဒ်မ 3.2.
2.5.2 ။ အကဲဆတ်သောတုံ့ပြန်ချက်
တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူထံမှကုန်ကြမ်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတုံ့ပြန်မှု (valence နှင့် arousal) သည်အွန်လိုင်းမေးခွန်းမှတုံ့ပြန်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအုပ်စုများ (အနိမ့်, အလတ်စား, ဒါမှမဟုတ်အမြင့်ဆုံး) သို့ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။ အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီ၏တုံ့ပြန်မှုထို့နောက် Emotion ၏အတွင်းဘာသာရပ်များအချက် (သာယာသောမနှစ်မြို့ဖွယ်, ခေါ်ဆောင်သွား, အကြမ်းဖက်များနှင့်ကြားနေ) နှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်း (အနိမ့်, အလတ်စား၏အကြားဘာသာရပ်များအချက်သုံးပြီးကှဲလှဲ (ANOVA) ၏ထပ်ခါတစ်လဲလဲဆောင်ရွက်ချက်များအားသုံးသပ်ခြင်းသုံးပြီးပျမ်းမျှနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည် နှင့်မြင့်မားသော) ။ ANOVAs "valence" နှင့် "arousal" အစီအမံများအတွက်လွတ်လပ်စွာဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
ထို့အပြင်တစ်ဦး One-Way ကို ANOVA အသုံးပြုသော porn ၏နာရီနှင့် Self-စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအကြားမည်သည့်ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိခဲ့လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့ Snyder ကိုယ်ပိုင်စောင့်ကြည့်စကေးမှတဆင့်ရရှိသောတုံ့ပြန်မှုအကဲဖြတ်ရန်ကောက်ယူခဲ့သည်။
2.5.3 ။ အဖြစ်အပျက်-Related အလားအလာ
ဦးနှောက်အလားအလာပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်ဦး 2048-ရုပ်သံလိုင်း BioSemi Active ကိုနှစ်ဦးစနစ်နှင့် ActiView software ကို (BioSemi, အမ်စတာဒမ်, အဆိုပါနယ်သာလန်) ကို အသုံးပြု. 64 နမူနာ / s နှုန်းမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ခဲ့ကြသည်။ ဒေတာများအစုံသုတ် EEG-Display ကို (; ဖူလ်ဟမ်, နယူးကာဆယ်, သြစတြေးလျဗားရှင်း 6.4.8) ကို အသုံးပြု. လုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြသည်။ ယင်းနမူနာနှုန်းမှာ processing စဉ်အတွင်း 256 နမူနာ / s လျှော့ချခဲ့ 0.1 Hz မှ 30 တစ်တီးဝိုင်း pass filter ကိုလျှောက်ထားခဲ့သည်။ ERP ယုဂ် -100 ms တစ်ခုချင်းစီမှ IAPS ပုံရိပ်များ၏တင်ပြချက်နှင့် ပတ်သက်. သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည် ms Post-လှုံ့ဆော်မှုစတင်ခြင်း 1000 မှအကျူး။ အားလုံးယုဂ်အခြေခံသည့်ဆုံးမခြင်းဟာ ERP တလျှောက်စတင်ခြင်းနှင့်အချက်အလက်အချက်များ stimulus မှကြိုတင် 100 ms ဖြစ်ပေါ်အတူတညျ့ခဲ့ကြသည်နောက်ထပ်စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်ပထမဦးဆုံးဒုတိယ Post-လှုံ့ဆော်မှုတင်ဆက်မှုတလျှောက် 15 data တွေကိုမှတ်လျှော့ချခဲ့သည်။ ANOVA ပုအတွင်း-ဘာသာရပ်အချက်များစိတ်ခံစားမှု (သာယာသောမနှစ်မြို့ဖွယ်, ခေါ်ဆောင်သွား, အကြမ်းဖက်များနှင့်ကြားနေ) နှင့် hemisphere (left, ညာ) ကို အသုံးပြု. တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်မှတ်မှာ ERP amplitude ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်တစ်ဦးကထပ်ခါတစ်လဲလဲဆောင်ရွက်ချက်များ။
အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်းတို့အပေါ်မှာ, ကအုပ်စုတစ်ခုချင်းစီအကြားအဓိကကွဲပြားခြားနားချက်သိသာသည်အခြားအခြေအနေများရန် "အကြမ်းဖက်" နှင့် "ခေါ်ဆောင်သွား" အခွအေနေဆွေမျိုးများ၏ ERP ခါးဆစ်အဘို့အဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်, ဒါကြောင့်အဲဒီနှစ်ခုစိတ်လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားကတော့ထူးခွားသညျ့အတှကျကိုးကားအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်ဟုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အလင်းဆုံချိုးဖောက်မှုများအဘို့ပြင်ပေးဖို့, ဖန်လုံအိမ်-Geisser လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအသုံးပြုသွားမည်ခဲ့သည်။ ရိုးရှင်းသောထူးခွားသညျ့မဆိုသိသာထင်ရှားသောအဓိကသက်ရောက်မှု၏ညှနျကွားဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
2.5.4 ။ ထိတ်လန့် reflex Modulation
ထိတ်လန့်တုံ့ပြန်မှုမော်ဂျူအတှကျအသုံးပွုမျက်လုံးမှိတ်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုက Nexus-10 (စိတ်မီဒီယာ BV ထုတ်လုပ်) အသံဖမ်းစက်ကိရိယာနှင့် Bio-သဲလွန်စ + software ကိုသုံးပြီးတိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ bipolar တွေ့ရစဉ်လျှပ်တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူ၏လက်ဝဲဘက်မျက်စိတွဲခဲ့ကြနှင့် musculus orbicularis oculi ၏အလားအလာပြောင်းလဲမှုများကိုတိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါတွေ့ရစဉ်နမူနာမှုနှုန်း 2048 / s ကိုကြီး 20-50 Hz ကနေတီးဝိုင်း pass filter ကိုမှတ်တမ်းတင်နေတုန်းလျှောက်ထားခဲ့သည်။ ကုန်ကြမ်းတွေ့ရစဉ်ဒေတာထို့နောက်အမြစ် amplitude သို့ကုန်ကြမ်းအကြိမ်ရေအချက်ပြမှုများကိုပြောင်းစတုရန်း (RMS အ) method ကိုဆိုလိုသုံးပြီးပြန်လည်တွက်ချက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါထိတ်လန့်မှိတ်လွှဲခွင်တန်ဖိုးထိတ်လန့်အာကာသယာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စမ်းသပ်မှုတွေပေါ်တွင်တွေ့ရစဉ် waveform အတွက်အထွတ်အထိပ်မြင့်တက်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ အထက်အဖြစ်, ထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံ ANOVAs စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းများအတွက်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြ (ကိုတွေ့မြင် ) ။
3.1 ။ ပါဝင်သူဒေသစစ်တမ်းများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်များတွင်တစ်ဦးအဓိကအားတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းနမူနာပါဝင်သည်။ လေ့လာမှုမှာပါဝင်သူများထဲမှတစ်ဦးကအများစုပညာရေး၏အနည်းဆုံးတစ်ဦးအလယ်တန်းကျောင်းအဆင့်ပြီးစီးကြသူကျောင်းသားများ, တစ်ဖက်နှင့်အတူနေထိုင်နေသို့မဟုတ်လက်ထပ်ခံရခြင်းဘယ်တော့မှဖြစ်စေဖြစ်ခြင်းအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအစီရင်ခံတင်ပြခြင်း, (ကြည့်ရှုကော့ကေးဆပ်သြစတြေးလျတွင်မွေးဖွားခံအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုဖော်ထုတ် စားပွဲတင် 1).
စားပွဲတင် 1 ။ လေ့လာမှုပါဝင်သူများ၏လူဦးရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများ။
3.2 ။ self-နားဆင်နိုင်ပါတယ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့် self-စောင့်ကြည့်
မေးခွန်းလွှာမှပါဝင်သူတုံ့ပြန်မှု၏ဖော်ပြချက်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည် စားပွဲတင် 2။ ပါဝင်သူအုပ်စုများညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်းအပေါ်အခြေခံပိုင်းခွဲခဲ့ကြသည်။ အသက်အရွယ်သိသိသာသာအုပ်စုများအကြားကွဲပြားဘူးဆိုလို။ အရေးကြီးတလမ်းလွတ်လပ်သော ANOVA Snyder စုစုပေါင်းရမှတ်က F (2, 49) = 1.892, p = 0.162 ပတ်သတ်ပြီးအတူအနိမ့်အလတ်များနှင့်မြင့်မားသောညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအုပ်စုများအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ရှိကွောငျးကိုပြသခဲ့သည်။
စားပွဲတင်2။ တစ်နှစ်လျှင် porn နာရီနှင့် Snyder စုစုပေါင်းအုပ်စုကွဲဂိုးသွင်း။
3.3 ။ အကဲဆတ်သောတုံ့ပြန်ချက်
ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ valence ratings ထံမှရလဒ်များ Emotion အပြန်အလှန်အားဖြင့်သိသိသာသာခြုံငုံ Group မှမပြခဲ့ပေ။ Follow-up, သော်လည်း "ခေါ်ဆောင်သွား" အတွက်သိသိသာသာအပြန်အလှန်ပြသခဲ့သည်နှင့် "သာယာသော" ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ valence (သာယာသော) ratings က F (2) = 3.243, p = 0.048 ခြားနားနေသည်။ သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ "arousal (ပြင်းထန်မှု)" ဆိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားထဲမှာ ratings (တွေ့မြင်နှင့်အတူမတွေ့ ပုံ 1).
ပုံ 1 ။ အကဲဆတ်သော valence (A) နှင့် arousal (Bအားလုံးအုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးချင်းစီစိတ်လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားများအတွက်) ratings ။ တစ်ဦးကသိသိသာသာ Group မှအပြန်အလှန် (နေရာတွေမှာကြယ်ပွခွငျးအားဖွငျ့မှတ်သား) က "ခေါ်ဆောင်သွား" နှင့် "သာယာသော" အမျိုးအစားထဲမှာ valence ratings များအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
3.4 ။ ဇီဝကမ္မဆောင်ရွက်ချက်များ
ထိတ်လန့် reflex Modulation ရလဒ်များကို (2) = 3.176, p = 0.051 တွေ့မြင်အရေးပါမှုက F ချဉ်းကပ်အားလုံးအခြေအနေများအပေါ်မျက်စိမှိတ်လွှဲခွင်ပေါ်မှာ Group မှသက်ရောက်ပုံများအားပြသခဲ့သည် ပုံ 2.
ပုံ2။ Startle-ရူးနှမ်းမျက်စိမှိတ်တုံ့ပြန်မှု (လက်ဝဲ) နဲ့အနိမျ့များအတွက်ကော်လံဂရပ်များ (ညာ) (A), အလယ်အလတ် (B) နှင့်မြင့်မားသော (C) porn အသုံးပြုမှုအုပ်စုများ။
မည်သည့်သိသာထင်ရှားသောအဓိကအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုမရှိခြင်းနေသော်လည်းရိုးရှင်းသောထူးခွားသညျ့ "အကြမ်းဖက်" စိတ်လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားကဦးနှောက်၏တိုကျရိုကျဒေသများရှိ 250-563 ms vs. "မနှစ်မြို့ဖွယ်" အတွက်သိသာထင်ရှားသော ERP Group မှသက်ရောက်မှုပြသခဲ့သည်။ တူနှစ်ဦးကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားအကြားသိသာထင်ရှားသောဆိုးကျိုးများလည်းနောက်ပိုင်းအချိန်ကာလ (563-875 ms) စဉ်အတွင်း posterior က်ဘ်ဆိုက်များတွင်တွေ့မြင်ခဲ့ကြ (ကိုကြည့်ပါ စားပွဲတင် 3; ပုံ 3) ။ အဓိကသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းမဟုတ်ဘဲအာရုံစူးစိုက်သော ERP ကွဲပြားခြားနားမှု၏ရလဒ်အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသည်။
ပုံ3။ တိုကျရိုကျမှာ ERPs (AF7 / AF8) နှင့်အင်, အလတ်စားနှင့်အမြင့် porn အသုံးပြုမှုအုပ်စုများအားလုံးစိတ်လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားကိုဖြတ်ပြီး parietal (P5 / P6) တည်နေရာ။ "အကြမ်းဖက်" စိတ်လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားကဦးနှောက်၏တိုကျရိုကျဒေသများနှင့် parietal ဒေသများတွင် 250-563 ms အကြား 563-875 ms vs. "မနှစ်မြို့ဖွယ်" အတွက်သိသာထင်ရှားသောအုပ်စုသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများသတိပြုပါ။
စားပွဲတင်3။ အကြမ်းဖက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားဖြစ်ရပ်-related အလားအလာ (ERPs) vs. မနှစ်မြို့ဖွယ်နှင့်ဆက်စပ်သောသိသိသာသာ Group မှသက်ရောက်မှု၏အကျဉ်းချုပ်။
လက်ရှိလေ့လာမှုကိုထိခိုက်တုံ့ပြန်မှုနှင့်၎င်းတို့၏ဇီဝကမ္မအရေးပါမှုကိုလေ့လာမှကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှုကိုဖော်ပြရန်တစ်ပြိုင်နက်အများအပြားနည်းလမ်းများအသုံးချဖို့ထိပ်တန်း-Down တြိဂံဖွဲ့ချဉ်းကပ်အလုပ်။ နောက်တဖန်အဓိကခြားနားချက်များထောက်ပြဖို့, ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ratings တစ်သတိ, တမင်တုံ့ပြန်မှုကိုလိုအပ်ထို့ကြောင့် cortical သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့အသုံးချထားတဲ့အမူအကျင့်အစီအမံဖြစ်ကြသည်။ ထိတ်လန့် reflex မော်ဂျူစိတ်ခွန်အားနိုး Prime ၏အခြေခံပေါ်မှာကုန်ကြမ်းကိုထိခိုက်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ non-သတိအတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ် (ကိုတွေ့မြင် ) နှင့် subcortical ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ, ဥပမာဖို့ပြောပြတယ်  ။ electroencephalography (နှင့်ကြောင်းမှနောက်ထပ်, ERP) cortical သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့မှအဓိကအားဖြင့်အထိခိုက်မခံဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းခွဲ cortical ဦးနှောက် (အဓိကအားဖြင့် Non-သတိ) လုပ်ငန်းစဉ်များအနေဖြင့်ညှိနှိုင်း input ကိုပါဝငျသညျ။ ဒါဟာအားလုံးဇီဝကမ္မအစီအမံရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ rating စွမ်းဆောင်ရည်မတူဘဲအတွက်သဘာဝအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲသွယ်ဝိုက်ကပြောသည်နိုင်ပါသည်။
ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏ကြိမ်နှုန်းကျွန်တော်သတိရှိရှိ (ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအစီအမံ) နှင့် Non-သတိရှိရှိ (သွယ်ဝိုက်အစီအမံ) စိတ်ခံစားမှုသတင်းအချက်အလက်တုံ့ပြန်ရသောလမ်းကိုပွောငျးလဲလျှင်ပိုက်ဆန်လျှော်၌ဤအသိပညာနှင့်အတူကျနော်တို့ကိုဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်သလဲ တစ်ဦးချင်းစီအုပ်စုဖြစ်သော်လည်းအဆိုပါ Snyder ရမှတ်မရှိခြားနားချက် Self-စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး-The ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနှင့်သွယ်ဝိုက်အစီအမံကနေတဆင့်ရရှိသောရလဒ်များသည်လက်ရှိလေ့လာမှုအမှန်ပင်သရုပ်ပြကှာဟအတွက်ရရှိသောရလဒ်များသည်သိသိသာသာ-ညွှန်ပြကွာခြားခဲ့ပါဘူး။
အဆိုပါ "ခေါ်ဆောင်သွား" ရုပ်ပုံများကိုအတိအလင်းလတ် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်မြင့်မားသောညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသင်တန်းသားများကိုဖြစ်စေထက်နိမ့် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းအဖွဲ့ကလျော့နည်းသာယာသောအဖြစ် rated ခဲ့ကြသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အနိမ့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကမရှိသလောက်ခေါ်ဆောင်သွားသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းထုတ်ရှာအံ့သောငှါ, ဒါကြောင့်အနိမ့်ညစ်ညမ်းအုပ်စုတစ်စုကိုတောင်နည်းနည်းစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းမဟုတ်မယ်ဆိုရင်စမ်းသပ် session တစ်ခုအတွင်းမှာ 'ခေါ်ဆောင်သွား "ပုံရိပ်တွေ၏တင်ဆက်မှုလျော့နည်းသာယာသောဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှင်းပြချက်အနိမ့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းအဖြစ်အများကြီးထိတွေ့မှုရှိခဲ့ကြပြီမဟုတ်ဒါအလယ်အလတ်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောအသုံးပြုသူများကိုသလောက် habituated ကြပြီမဟုတ်ကြောင်းပါဝင်သည်နိုင်ဘူး။ Contrastingly, porn မနှစ်မြို့ဖွယ်အသုံးပြုရန်ဖို့မရွေးချယ်နိုင်အောင်အနိမ့်အသုံးပြုမှုအုပ်စုတစ်စုနှင့်လေ့သို့ရောကျစခွေငျးငှါကိုရှာဖွေသူတွေကိုမှာအားလုံးအချက်တစ်ခုဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။ စိတ်ဝင်စားစရာမြင့် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းအဖွဲ့အလတ်စားအသုံးပြုမှုအုပ်စုတစ်စုထက်ပိုမနှစ်မြို့ဖွယ်အဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ စာရေးသူ [ဤကြောင့်က Harper ကိုနှင့် Hodgins အားဖြင့်ပြသလျက်ရှိသည်အဖြစ်သူတို့များသောအားဖြင့်, ထွက်ရှာအံ့သောငှါစခွေငျးငှါနှိုးဆွမှုအဆင့်အတန်းပေးမ IAPS database ထဲတွင်ပါရှိသော "ခေါ်ဆောင်သွား" ပုံရိပ်တွေ၏အတော်လေး "ပျော့-Core" သဘာဝမှဖြစ်နိုင်သည်အကြံပြု58] ညစ်ညမ်းပစ္စည်းမကြာခဏကြည့်ရှုနဲ့အတူများစွာသောတစ်ဦးချင်းစီကိုမကြာခဏဇီဝကမ္မ arousal ၏တူညီသောအဆင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကပိုပြင်းထန်သောပစ္စည်းကြည့်ရှုသို့ escalade သော။ အဆိုပါ "သာယာသော" စိတ်လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားအဖြစ်အနည်းငယ်ပိုပြီးမနှစ်မြို့ဖွယ်ပျမ်းမျှအခြားအုပ်စုများထက်ပုံရိပ်တွေ rating မြင့်အသုံးပြုမှုအုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူအတော်လေးဆင်တူဖြစ်ဖို့အားလုံးကိုသုံးအုပ်စုများက valence ratings ကိုမြင်တော်မူ၏။ ဤသည်နောက်တဖန်ကြောင့် "သာယာသော" ရုပ်ပုံများကိုမြင့်မားအသုံးပြုမှုအုပ်စုတစ်စုအတွက်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်လုံလောက်သောလှုံ့ဆော်မှုမပေးအပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်သည်။ လေ့လာရေးတသမတ်တည်း [မကြာခဏညစ်ညမ်းပစ္စည်းထုတ်ရှာသောသူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လေ့သက်ရောက်မှုကြောင့်အစာစားချင်စိတ်အကြောင်းအရာအပြောင်းအလဲနဲ့တစ်ဦးဇီဝကမ္မ downregulation ပြခဲ့ကြ3,7,8] ။ ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုလေ့လာတွေ့ရှိရလာဒ်များအတွက်အကောင့်စေခြင်းငှါစာရေးသူ '' ရန်တွေ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
4.2 ။ အဖြစ်အပျက်-Related အလားအလာ (ERPs)
ထင်ရှားတဲ့သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ rating ရလဒ်များကိုမှမတူဘဲဖြစ်သည့်အုပ်စုများအကြားက "အကြမ်းဖက်" အခြေအနေရန် "မနှစ်မြို့ဖွယ်" ဆွေမျိုးများအကြားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါခါးဆစ်၏အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်းအပေါ်သို့တစ်ခုတိုးလာအနုတ်လက္ခဏာအထွတ်အထိပ်ဦးနှောက်၏တိုကျရိုကျဒေသများရှိနှစ်ဦးစလုံး hemisphere ဖြတ်ပြီးကွေး (400-500 ms) ၏ LPP အဆင့်စဉ်အတွင်း "မနှစ်မြို့ဖွယ်" အခွအေနေအဘို့အနိမ့် porn အသုံးပြုမှုအုပ်စုတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ဤသည်ကိုသာအလတ်စားနှင့်မြင့်မားသောညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအုပ်စုများအတွက်ညာဘက် hemisphere အတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဒီနောက်ပိုင်းမှာအကျိုးသက်ရောက်မှုစာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရှင်သန်မပြုခဲ့သော်လည်း, လေ့လာတွေ့ရှိသည့်လမ်းကြောင်းသစ်ကိုပိုပြီးမကြာခဏ porn အသုံးပြုသူတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှ lateralisation အကျိုးသက်ရောက်မှုညွှန်ပြနိုင်ဘူး။ ဒါဟာထင်ရှားတဲ့အနုတ်လက္ခဏာအထွတ်အထိပ်ကိုလည်း Cuthbert et al ဖွငျ့ဖျြောလေ့လာမှုတစ်ခုခြင်းဖြင့်သရုပ်ပြခဲ့သည်။  သူတို့လေ့လာမှုအတွက် "ကြားနေ" အခွအေနေသွားအရှိဆုံးအနုတ်လက္ခဏာကြီးဦးနှောက်၏တိုကျရိုကျဒေသများဆိုသော်ငြားမနှစ်မြို့ဖွယ်ဓါတ်ပုံတွေထက်သာယာသောအဘို့ သာ. ကြီးမြတ် positive ပြသတွေ့ရှိခဲ့ရှိရာ။ အဆိုပါဖျောပွစက္ကူ၏စာရေးဆရာများ (ကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလှုပ်ရှားမှုအတွင်းသိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်ပြောင်းလဲမှု evoking ကြောင့်သူတို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာသာယာသောပုံရိပ်တွေမှမဟုတ်ဘဲတစ်ဦးအခ်ါ valence ခြားနားချက်ထက်တိုးပွားထိခိုက်စေ arousal ရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်ကြောင်းဖျောပွခွငျးအားဖွငျ့သာယာသောပုံရိပ်တွေ၏ဤဆွေမျိုးအပြုသဘောပြောင်းလဲမှု၏အဓိပ္ပာယ်စေရန်ကြိုးပမ်း အစားပုဂ္ဂလဒိဋ္ arousal ratings ထက်အသားအရေ conduction) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တိုကျရိုကျ asymmetry ၏ဤပုံစံလတ်နှင့်မြင့်မားသောညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအုပ်စုများ၏လက်ဝဲ hemisphere ထုတ်လုပ်သည် "မနှစ်မြို့ဖွယ်" ပုံရိပ်တွေ waveform ့ဆွေမျိုးအပြုသဘောအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါတယ်။ မကြာမီကသုတေသန [တွေ့မြင် (ချဉ်းကပ်စိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များနှင့်ဆက်စပ်စေခြင်းငှါဆွေမျိုးလက်ဝဲတိုကျရိုကျလှုပ်ရှားမှုတိုးလာကြောင်းအကြံပြု60,61]) ။ ဤသည်တို့ကြောင့်က "မနှစ်မြို့ဖွယ်" ရုပ်ပုံများကိုမှ activation အတွက်ဆွေမျိုးတိုကျရိုကျခြားနားချက်ရန်, ညစ်ညမ်းပိုပြီးမကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်ဖြစ်နိုင်သည်ပိုပြီးအပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်စေမဆံ့ဖို့မနှစ်မြို့ဖွယ်ပုံရိပ်တွေထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းညွှန်ပြလိမ့်မယ်။
ထို့အပြင်လက်ယာဘက်ခြမ်းရှိ“ အကြမ်းဖက်” နှင့်“ မနှစ်မြို့ဖွယ်” စိတ်လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားများသည်နောင်ကာလအနည်းငယ်အကြာ (> ၅၀၀ ms) မှအနိမ့်မှအလယ်အလတ်အထိမြင့်မားသောညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများသို့ပြောင်းရွှေ့လာသည့်အလားတူလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်သွားပုံရသည်။ ဦး နှောက် ဤတွေ့ရှိချက်များအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုမကြာခဏအသုံးပြုသူများကအနိမ့်အပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအကြမ်းဖက်မှုနှင့်မနှစ်မြို့ဖွယ်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာပုံရိပ်များကိုလွန်စွာကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်အလားတူအပြောင်းအလဲကိုအသုံးချနိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ ဦး နှောက်၏ပိုမိုအာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့်ဆက်စပ်သောနေရာများသို့ပိုမိုနောက်ကွယ်မှ ဦး တည်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစား (“ အကြမ်းဖက်” နှင့်“ မနှစ်မြို့ဖွယ်”) နှစ်ခုကို ထပ်မံ၍ LPP အဆင့်တွင်မြင့်မားသောညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှုအုပ်စုတွင်ပိုမိုဆင်တူစွာပြုလုပ်ခဲ့သည် (> 500 ms) သူတို့အနိမ့်နှင့်အလတ်စားအသုံးပြုမှုအုပ်စုများအတွက်သီးခြားရှိနေဆဲရှိရာ။ ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုပုံစံသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမကြာခဏထိတွေ့ခြင်းကကြိုက်နှစ်သက်မှုကိုတိုးမြှင့်စေနိုင်ပြီး၎င်းသည်လှုံ့ဆော်မှုကို ဦး တည်သည့်လှုံ့ဆော်မှုကိုချဉ်းကပ်ခြင်းအားဖြင့်အကြမ်းဖက်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းမှရရှိသောဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောရှောင်ရှားနိုင်မှုကြောင့်ထုတ်လုပ်သော LPP နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုသူများစွာသည် desensitisation effect နှင့်ပိုမိုဝတ္ထုနှင့်အစွန်းရောက်ပစ္စည်းများကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ခြင်းတို့ကြောင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပိုမိုဂရပ်ဖစ် (သို့) ပြင်းထန်သောအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ တိမ်းညွတ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။58] ။ ဤသည်ပစ္စည်းကိုမကြာခဏမြင့်အသုံးပြုမှုအုပ်စုတွင်တစ်ဦးချင်းစီမှရစေတယ်ထို့ကြောင့်အလားတူက "အကြမ်းဖက်" ရုပ်ပုံများကိုတစ်ဦးဇီဝကမ္မအဆင့်ပေါ်ရှိ "ခေါ်ဆောင်သွား" ရုပ်ပုံများကိုတုံ့ပြန်စေခြင်းငှါအရာ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ) အကြမ်းဖက်မှုအမျိုးမျိုးပြုမူပုံဖော်ထားတဲ့ညစ်ညမ်းအမျိုးအစားများပါဝင်နိုင်ပါသည်။
ယခင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်, တုံ့ပြန်မှုမော်ဂျူ Startle, valence အပေါ်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အလေးပေးနှင့်အတူ subcortical ထိခိုက်စေအပြောင်းအလဲနဲ့မှအထိခိုက်မခံဖြစ်ပါတယ်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းရလဒ်များအနည်းဆုံးထိတ်လန့်-inducing ဖြစ်ရန် "ခေါ်ဆောင်သွား" အမျိုးအစားပြသခဲ့သည်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, အုပ်စုသုံးစုကိုဖြတ်ပြီး, က "အကြမ်းဖက်" စိတ်လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားအကြီးဆုံးထိတ်လန့်တုန့်ပြန်ရူးနှမ်း။ ရလဒ်တွေကိုရယူပေမယ့်သူကတစ်ဦးချင်းစီအုပ်စုဝိသေသထိတ်လန့်တုံ့ပြန်မှုသုံးခုကွဲပြား profile များကိုရှိပါတယ်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်ခါးဆစ်၏အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်းတို့အပေါ်မှာသာအရေးပါမှုကိုချဉ်းကပ်တဲ့ကို p-တန်ဖိုးကိုပြသသည်။ ထိတ်လန့်တုံ့ပြန်မှုများ၏ဆွေမျိုးဖြန့်ဖြူးအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတိုးပွါးဖို့ပေါ်လာအဖြစ်တစ်ဦးကလမ်းကြောင်းသစ် (မြင့်သောညစ်ညမ်းသုံးအလတ်စားမှအနိမ့်အနေဖြင့်ရွေ့လျားမြင်နိုင်သည်ဆိုလိုသည်မှာမြင့် porn အသုံးပြုမှုကိုအုပျစု) (ခေါ်ဆောင်သွားနှိုးဆွသောအနည်းဆုံးအကြားထိတ်လန့်တုံ့ပြန်မှု၏အကြီးမားဆုံးအကွာအဝေးရှိပြီးယင်း အများဆုံး arousal (အကြမ်းဖက်) စိတ်ခံစားမှုအမျိုးအစား) ။ ဒီအမြင့်မားတဲ့ကြိမ်နှုန်း porn အသုံးပြုသူများသည် (သို့သော်သာသှေး) non-သတိအဆင့်တွင်အခြားစိတ်ခံစားမှုအမျိုးအစားစပ်လျဉ်းပိုပြီးအစာစားချင်စိတ်အတိုင်း "ခေါ်ဆောင်သွား" ပုံရိပ်တွေကို process ကြောင်းဖော်ပြသည်။ အဆိုပါလေ့လာအကျိုးသက်ရောက်မှုဤမြေကွက်၌အများဆုံးလေ့လာမှုများမှလိုက်နာမှုအတွက်ဖြစ်ဟန်၎င်းစေ့စေ့အောက်မေ့ထိတ်လန့်တုံ့ပြန်မှုဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုမှ [ပိုများသောသာယာသောလှုံ့ဆော်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားလွှဲခွင်မှိတ်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်32,42,43] ။ မြင့် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းအဖွဲ့ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေမှထိတ်လန့်တုန့်ပြန်တဲ့ဆွေမျိုးကျဆင်းခြင်းကြောင့်အပေါငျးတို့သပုံရိပ်တွေဖွယ်ရှိသင်တန်းသားများဝတ္ထုဖြစ်ခြင်းထက်ပိုမိုတင်ဆက်ထို့ကြောင့်၎င်းတို့၏အကျိုးသက်ရောက်စေ Non-သတိထိတ်လန့်တုန့်ပြန်ကညွှန်ပြရန်ဖြစ်နိုင်သည်ပြသဘာကြောင့်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှရှင်းပြချက် လေ့ဆက်လက်မဟုတ်ခဲ့သောသာယာသောနှိုးဆွခဲ့ပါတယ်။ ဒါဖြစ်သကဲ့သို့ယခင်လေ့လာမှုများကြောင့်ပစ္စည်းတစ်ခုထိတ်လန့်အာကာသယာဉ်မှတိုးမြှင့်မျက်စိမှိတ်တုန့်ပြန် erotica ရလဒ်များထပ်ခါတလဲလဲကြည့်ရှုပြသကြသကဲ့သို့, ပျင်းစရာနှင့်ဆန္ဒရှိဖြစ်လာ, ရှိစေခြင်းငှါအတူတူရုပ်ပုံများကြည့်ရှုထပ်ခါတလဲလဲအဘယျသို့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ပါလိမ့်မယ်  ။ သူတို့ကအတော်လေးပိုပြီးမနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်ရှာတွေ့စေခြင်းငှါအဖြစ်အနိမ့်နှင့်အလတ်စား porn အသုံးပြုမှုအုပ်စုများတွင်တွေ့မြင်အဆိုပါဆွေမျိုးပိုမိုမြင့်မားလွှဲခွင်ထိတ်လန့်အကျိုးသက်ရောက်မှု, ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုရှောင်ရှားအုပ်စုထဲမှာသေူကရှင်းပြသည်နိုင်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်လည်းရရှိသောရလဒ်များကို [လေ့သက်ရောက်မှုထိတ်လန့်မျက်စိမှိတ်တုံ့ပြန်မှုတိုးမြှင့်ပြသခဲ့ကြသည်အဖြစ်သိရပါအံ့, ဤအုပ်စုများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကိုသူတို့အတိအလင်းကြောင့်အခြားသူတွေအကြားအရှက်၏အကြောင်းပြချက်မှဖြစ်နိုင်သည်ဖော်ပြထားထက်ပိုမိုညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ကြဘူး, ကြောင့်လေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမှဖြစ်မည်အကြောင်း41,42].
ရရှိသောအဓိပ်ပာယျအဆငျ့မျှော်လင့်ထားသည့်အရာကိုမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်မကြာခဏနှင့်ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအကြားရှိကွာဟမှုဖေါ်ပြခြင်းဒေတာကနေပေါ်ထွက်လာခံရဖို့ပုံရသည်။ ဒါဟာကွန်ကရစ်ရလဒ်များ၏မရှိခြင်းအနိမ့်ပါဝင်သူနံပါတ်များကိုမှစွပ်စွဲခံရနိုငျသောစာရေးဆရာများ '' အမြင်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကပိုကြီးဆောင်များတွင်ထက်ပိုမိုဖွယ်ရှိပိုပြီးအားကောင်းတဲ့သက်ရောက်မှု detect လုပ်ဖို့ပါဝါကိုတိုးမြှင့်လိမ့်မယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့လက်ရှိလေ့လာမှု၏ဇီဝကမ္မဒေတာအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာလမ်းကြောင်းသစ်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ratings မှထပ်တူထပ်မျှတွေ့ရှိချက်များ၏အခြားပုံစံကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းပေါ်လာသည်။
4.4 ။ ကန့်သတ်
လက်ရှိလေ့လာမှုပြည့်စုံခဲ့ပေမဲ့လည်းမလွှဲမရှောင်န့်အသတ်ရှိကျန်ရစ်၏။ ဒါဟာခေတ်မီခေတ်အတွက်ပိုပြီးဖြစ်သည့် "ပျမ်းမျှအားညစ်ညမ်း" အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်စေမည့်မည်စခွေငျးငှါအဘယျသို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်သည့် IAPS ဒေတာဘေ့စနေတဆင့်ရရှိသော "ခေါ်ဆောင်သွား" အမျိုးအစားကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သောရုပ်ပုံများကို erotica သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းတစ်ခုခေတ်မမီတော့သည့်ကိုယ်စားပြုမှုအဖြစ်ရှုမြင်စေခြင်းငှါဖော်ပြခဲ့တဲ့ရပါမည် ကျယ်ပြန်နှင့်အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများယဉ်ကျေးမှုကိုပြောင်းလဲဘို့အကောင့်တစ်ခုထက်ပိုသောကို up-to-date ဖြစ်အောင်စံချိန်စံညွှန်းမီ image ကိုဒေတာဘေ့စအသုံးချဖို့လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင့်မားသောညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများလေ့လာမှုကာလအတွင်းသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု downregulated ။ ဤသည်ရှင်းပြချက်ကိုအနည်းဆုံး [အသုံးပြုသောခဲ့သည်7,8] ငယ်များ LPP (နှောင်းပိုင်းကအပြုသဘောအလားအလာ) ကရည်ညွှန်းနေတဲ့ဆီးအတားမရှိချဉ်းကပ်လှုံ့ဆျောမှုပြသရာ၎င်းတို့၏ရလဒ်များကိုဖော်ပြရန်မထိန်းချုပ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသတင်းပို့တစ်ဦးချင်းစီအားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေမှ amplitude ။ LPP amplitude [ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ downregulation အပေါ်သို့လျော့ချဖို့ပြသပြီ62,63] ။ ထို့ကြောင့်, ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေမှ LPP အနေနဲ့ဘယျလိုမှမက "ခေါ်ဆောင်သွား" ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်အုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိခဲ့သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းများအတွက်အကောင့်လိမ့်မည်။ ဤသည်တို့ကြောင့်သင်တန်းသားများ [သူတို့မဟုတ်ရင်ပြုစေခြင်းငှါအဘယ်သို့သောအရာ, စမ်းသပ် session တစ်ခုအတွင်းမှာညစ်ညမ်း (သို့မဟုတ်ဤအမှု၌, ခေါ်ဆောင်သွား) ပုံရိပ်တွေကိုကြည့်နေတုန်း masturbate ခွင့်ပြုမခံရနိုငျ64].
လက်ရှိလေ့လာမှုတစ်ဦးကထပ်မံကန့်သတ်သည့်ပါဝင်သူရေကူးကန် Self-အစီရင်ခံညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအပေါ်အခြေခံပြီးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအုပ်စုများသို့ခွဲခြားခဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏ဤလယ်ပြင်၌ဇီဝြဖစ်စဉ်အပေါ်အခြေခံလေ့လာမှုများအတော်လေးမကြာသေးမီသည်အတိုင်း, သေးa"ကိုအနိမ့်" သို့မဟုတ် "အမွငျ့မား" ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, ပြော, ဇီဝကမ္မအမှတ်အသားများအစုတခုသို့မဟုတ်အကြားရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ဂုဏ်ထူးဘို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ဇီဝကမ္မပရိုဖိုင်းကိုအဲဒီမှာမတည်ရှိပါဘူး အုပ်စုတစု။ ဒီနည်းလမ်းကိုနှင့်အတူတင်ပြအဆိုပါသိသာပြဿနာကြောင့်အစီရင်ခံ-အောက်မှာသို့မဟုတ် Over-သတင်းပို့သူတို့ရဲ့အမှန်တကယ် porn အသုံးပြုမှုတချို့ဖြေဆိုသူ 'ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ပြင်လက်ရှိလေ့လာမှုလူသိများနှင့်ဆေးခန်းရောဂါညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပြဿနာတွေနဲ့လက်တွေ့နမူနာအပေါ်အားကိုးခဲ့ပါဘူး။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအတွက်အသုံးပြုအဆိုပါဆောင်များတွင်ဆေးခန်းသိသိသာသာမဟုတ်ချေါစေခြင်းငှါထို့ကြောင့်ဆေးခန်းရောဂါနှင့် Non-ဆေးခန်းရောဂါတစ်ဦးချင်းစီအကြားတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်အဖြစ်ခိုင်မာတဲ့ရလဒ်အဖြစ်ထောက်ပံ့ပေးမရသော unproblematic porn ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူတစ်ဦး "ပုံမှန်" အကွာအဝေးအတွင်းတည်ရှိပြီးဖြစ်သည်။
ထို့ပြင်သက်ရောက်မှုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအုပ်စုများအကြားကွာခြားနေတဲ့ဆက်စပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုထက် causation ညွှန်ပြစေခြင်းငှါဤစာတမ်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ တစ်ဦးက link ကိုအရက်လောင်သူယေဘုယျလူဦးရေအတွက်တစ်ဦးချင်းစီနှိုင်းယှဉ်ဤနေရာတွင်ရေးဆွဲနိုင်ပါသည်။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းနှစ်ခုစလုံးအများအပြားဖြင့်စေ့စပ်ပျြောမှေ့စများနှင့်အလားအလာထိခိုက်အပြုအမူတွေဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးချင်းစီကသာလူနည်းစုအလွန်အကျွံကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ဆက်စပ်နေသောဆိုးရွားသောအပြုအမူဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေသည်ရှိရာအမှတ်ဤအပြုအမူတွင်ပါဝင်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်များတွင်ရှိသည်မဟုတ်နှင့်ညစ်ညမ်း၎င်းတို့၏ (အလွန်အကျွံ) ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့် observable ဆိုးရွားသောအပြုအမူအကျိုးသက်ရောက်မှုမဆိုမျိုးကိုခံရဘယ်တော့မှမည်သူတစ်ဦးချင်းစီ၏ဖွဲ့စည်းခဲ့ကွောငျးလုံးဝဖွယ်ရှိသည်။
အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏လေ့လာမှုတစ်ခုအတော်လေးမကြာသေးမီဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်ပြီး, အတိအလင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်သတိသက်ရောက်မှုတိုင်းတာဖို့အသုံးပြုတဲ့စံချိန်စံညွှန်းမီမေးခွန်းလွှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ။ သူတို့တွင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအမျိုးမျိုးရှုထောင့်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့အသုံးပြုအတော်ကြာနေပြီထူထောင်ချိန်ခွင်နှင့်အစီအမံများရှိပါသည်တည်ရှိ: အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive စကေး , အညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံတဏှာမေးခွန်းလွှာ , အညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုစကေး  နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုစကေး , ဒါပေမယ့်အင်တာနက်ကနေတစ်ဆင့်တစ်ဦးချင်းစီ '' ညစ်ညမ်းဝယ်ယူများ၏လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝနှင့်အတူနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကဤအကြေးခွံပေါ်တွင်ပစ္စည်းများကိုအများအပြားကရရှိနိုင်ပါသည်ပေါရာဏနှင့်မွမ်းမံရန်လိုအပ်အဖြစ်ထင်ရှားစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ကြောင့်ရှိပြီးသား၏မရှိခြင်း, ကောင်းစွာ-အတည်ပြုခြင်းနှင့် psychometrically သံကိုအတိုင်းအရှည်အများအပြားလေ့လာမှုများ (ကြှနျုပျတို့ပွုမိပါပွီကဲ့သို့) In-အိမ်သူအိမ်သားမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနှင့်သုံးစွဲဖို့ရွေးချယ်ပြီ, ရည်ရွယ်ချက်-built နှင့်အခြားသူများနေတုန်းအမှတ်ပေး၏ပစ္စည်းများနှင့်နည်းလမ်းများတီထွင် (ညစ်ညမ်းစွဲလေ့လာနေအထူးသဖြင့်သူတို့အား) ရိုးရိုးဖို့ရွေးချယ်ကြပါတယ် တည်ဆဲပစ္စည်းဥစ္စာစွဲအကြေးခွံကပြွီးနှင့်စကားလုံးညစ်ညမ်းနှင့်အတူစွဲလမ်းသောဥစ်စာ (ဥပမာအရက်, ကင်း, ဘိန်းဖြူ, etc) အစားထိုး။ ဤပြဿနာကိုဤမြေကွက်၌လေ့လာမှုများအကြားတသမတ်တည်းနှင့်တိကျမှုရလဒ်များကိုဆည်းပူးဖို့အတိုင်းအတာ၏ reproducibility နှင့်တရားဝင်မှု၏မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အားလုံးအတိုင်းအတာသိသိသာသာ (သို့မဟုတ်သိသာထင်ရှားသောနီးစပ်) ရလဒ်များပြသပေမယ့်အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, ကရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ratings အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာကွဲပြားမှုဟာဇီဝကမ္မအစီအမံအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြားနားချက်များမဟုတ်ကြသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ တစ်ဦး dissociation ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနှင့်သွယ်ဝိုက်တုံ့ပြန်မှုအကြားရှာတွေ့ခဲ့သည်ဘယ်မှာစကားလုံးသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့အလားတူ (တွေ့မြင် ) ဒီအကျိုးသက်ရောက်စေသတင်းအချက်အလက်နှစ်ဦးစလုံးသတိရှိရှိနှင့် Non-သတိရှိရှိလုပ်ငန်းများ၌သောလမ်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်အဖြစ်, တိုင်းတာခြင်းမရှိတစ်ခုတည်းနည်းလမ်းတစ်ရပ်တစ်ဦးချင်းစီ '' စစ်မှန်တဲ့စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်တစ်ခုတိကျဖျောပွခကျြပေးနိုငျကောက်ချက်ချဖို့ခိုင်ခိုင်လုံလုံကျိန်းသေရှိပါတယ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဒါကြောင့်ပြောနေခုနှစ်, သွယ်ဝိုက်နှင့်အကဲဆတ်သောနှစ်ဦးစလုံးတိုင်းတာခြင်းနည်းစနစ်ထည့်သွင်းမျိုးစုံစံချိန်စံညွှန်းမီနည်းလမ်းများစိတ်ခံစားမှုမှဦးဆောင်ထိခိုက်စေအပြောင်းအလဲနဲ့အပေါငျးတို့သမတူညီတဲ့ရှုထောင့်မှန်းနိုင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသွားမည်ခံရဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ အကယ်စင်စစ်, တစ်ဦးတည်းစစ်တမ်းတစ်ခုအစိုင်အခဲရလဒ်များကိုမှဦးဆောင်လမ်းပြမပေးပါဘူး။
အဆိုပါစာရေးဆရာ EEG နဲ့သူ့ရဲ့မြင့်မားတန်ဖိုးထားအကူအညီတောင်း Ross ကဖူလ်ဟမ်ကျေးဇူးတင်နှင့်အချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့ startle ချင်တယ်။ သူတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအသိပညာ, ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူအံ့သြဖွယ်လူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
Sajeev Kunaharan, Sean Halpin, Thiagarajan Sitharthan, Shannon Bosshard နှင့်ပေတရု Walla ပဋိသန္ဓေနှင့်စမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်း; Sajeev Kunaharan အဆိုပါစမ်းသပ်ချက်ဖျော်ဖြေ; Sajeev Kunaharan နှင့်ပေတရု Walla ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ; Sajeev Kunaharan, Sean Halpin နှင့်ပေတရု Walla ပစ္စည်းများ / ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ tools များလှူဒါန်းခဲ့; Sajeev Kunaharan နှင့်ပေတရု Walla စက္ကူရေးသားခဲ့သည်; Sean Halpin, Thiagarajan Sitharthan နှင့် Shannon Bosshard မှတ်ချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များအပါအဝင် input ကိုနှင့်တုံ့ပြန်ချက်ရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။ အားလုံးစာရေးဆရာများအစီရင်ခံမှုသိသိသာသာလှူဒါန်းခဲ့သည်။
Harkness, EL; Mullan, B, .; အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်လိင်ကွဲအရွယ်ရောက်သြစတြေးလျနေထိုင်သူများအတွက်လိင်အန္တရာယ်အပြုအမူအကြား Blaszczynski, အေအဆိုပါအသင်းမှ။ အပြုအမူ Helath နှင့်ဆေးပညာ၏ Australiasian Society ၏ရှေ့ဆက်မည်အော့ကလန်, နယူးဇီလန်, 12-14 ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 ၌တည်၏။ [Google Scholar]
Fisher က, WA, ဗာရက်, အေကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း: အင်တာနက်လိင်အပေါ်တစ်ဦးကလူမှုရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်။ ဂျေလိင်။ res ။ 2001, 38, 312-323 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Cooper က, အေလိင်နှင့်အင်တာနက်: သစ်ကိုထောင်စုနှစ်သို့ surfing ။ CyberPsychol ။ ပြုမူနေ။ 1998, 1, 187-193 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Allen က, M က .; Emmers, T က .; Gebhardt, L ကို .; Giery, မုဒိမ်းဒဏ္ဍာရီများ၏ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်လက်ခံမှ MA Exposure ။ ဂျေ Community ။ 1995, 45, 5-26 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Prause, N ကို .; သံမဏိ, VR; Staley, C ကို .; လိင်ဆက်ဆံဖက်များ၏နံပါတ်နှင့်ဆက်စပ်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှ Sabatinelli, ဃနှောင်းပိုင်းအပြုသဘောအလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ Soc ။ Cogn ။ အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ Neurosc ။ 2015, 10, 93-100 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Roberts သည်, တစ်ဦးက .; ယန်, M က .; Ullrich, S ကို .; Zhang က, T က .; Coid, ဂျေ .; ရှင်ဘုရင်က, R ကို .; Murphy က UK မှာ R. အမျိုးသားများရဲ့ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု: ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်ပြဿနာအပြုအမူ။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2015, 16360 ။ [Google Scholar]
Buzzell, T က .; FOSS, D ကို .; Self-ထိန်းချုပ်မှုသီအိုရီနှင့် deviance အဘို့အခွင့်အလမ်းများတစ်ဦးကစမ်းသပ်: အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုရှင်းပြ Middleton, Z. ။ ဂျေ Crim ။ တရားမျှတရေးပေါ့ပ်။ အစွန်းရောက်။ 2006, 13, 96-116 ။ [Google Scholar]
ဟီလ်တန်, DL, Jr .; watts, C. ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲမြား: A မှ neuroscience ရှုထောင့်။ တစ်ဟုန်ထိုး။ Neurol ။ int ။ 2011, 2, 19 ။ [Google Scholar] [PubMed]
မန်စီနီ, C ကို .; Reckdenwald, တစ်ဦးက .; Beauregard, ဘဝသင်တန်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများ၏ပြင်းထန်မှုအပေါ်အီးညစ်ညမ်းထိတွေ့: တုပနှင့် cathartic ဆိုးကျိုးများ။ ဂျေ Crim ။ တရားစီရင်ရေး 2012, 40, 21-30 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Seto, လိင်၏ Psychophysiology ခုနှစ်တွင် paraphilic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွား၏ MC Psychophysiological အကဲဖြတ်; Janssen, အီး, Ed က .; Indiana ပြည်နယ်စာနယ်ဇင်းတက္ကသိုလ်: Bloomington, IN, အမေရိကန်, 2007; စစ။ 475-491 ။ [Google Scholar]
Vegas, V ကို .; Malamuth, မိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း: ယေဘုယျနှင့်တိကျသောအန္တရာယ်အချက်များများ၏အခြေအနေတွင်ညစ်ညမ်း၏အခန်းကဏ္ဍ။ Aggressive ။ ပြုမူနေ။ 2007, 33, 104-117 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Wright, PJ; Tokunaga, RS, Kraus, ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု၏အေတစ်ဦးတွင် Meta-အားသုံးသပ်ခြင်းနှင့် General ပြည်သူ့အင်အားလေ့လာရေးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏အမှန်တကယ်တမန်တော်ဝတ္ထု။ ဂျေ Community ။ 2015, 66, 183-205 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Paolucci, EO; Genuis, M က .; Violato, C တို့ညစ်ညမ်း၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်ထုတ်ဝေသုတေသနတစ်ဦးက Meta-analysis သည်။ Med ။ မြီးကောင်ပေါက်စိတ်ထဲ။ 1997, 72, 1-2 ။ [Google Scholar]
Johnson, SA လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုများတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အခန်းကဏ္:၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်မှုခင်းဆိုင်ရာစိတ်ပညာရှင်များအတွက်အချက်အလက်များ။ Int ။ ဂျေအရေးပေါ်။ ဆရာ။ ကျန်းမာရေးဟမ် ကြက်သွန်ဖြူ။ 2015, 17, 239-242 ။ [Google Scholar]
Hald, GM က; Malamuth, မိုင်, Yuen, C. ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုထောက်ပံ့သဘောထားတွေ: nonexperimental လေ့လာမှုများအတွက်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ဆွေးနွေးရန်။ Aggressive ။ ပြုမူနေ။ 2010, 36, 14-20 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
ဖာဂူဆန်, CJ; Hartley, RD အဆိုပါအပျော်အပါးဒင်္ဖြစ်ပါတယ် ... ကုန်ကျစရိတ် damnable? မုဒိမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးအပေါ်ညစ်ညမ်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ Aggressive ။ အကြမ်းဖက်ပြုမူနေ။ 2009, 14, 323-329 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Szymanski, DM; Stewart-Richardson, DN ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ပတ်သက်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများသည်ငယ်ရွယ်သောလိင်ကွဲလိင်ကွဲယောက်ျားလေးများကိုအချစ်ဇာတ်လမ်းများနှင့်ဆက်စပ်မှု။ ဂျေအမျိုးသားထီး။ 2014, 22, 64-82 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Conner, ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှု SR ကြိမ်နှုန်းသွယ်ဝိုက်အောက်ပိုင်းဆက်ဆံရေးစီးပွားပျက်ကပ်ရောဂါလက္ခဏာများမှတဆင့်ယုံကြည်မှုနှင့်တရုတ်လူငယ်လူကြီးများအကြားတွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Assault နှင့်အတူ Associated ဖြစ်ပါတယ်။ သခင်၏စာတမ်း, Kansas ပြည်နယ်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်, မန်ဟက်တန်, KS, အမေရိကန်, 2014 ။ [Google Scholar]
ပန်းခြံ, BY; Wilson က, G .; Berger, ဂျေ .; Christman, M က .; Reina, B, .; ဆရာတော်, F ကို .; Klam, WP; Doan, AP အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေပါသလား လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ ပြုမူနေ။ သိပ္ပံ။ 2016, 6, 17 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Mavratzakis, တစ်ဦးက .; ဟားဘတ်, C ကို .; Walla, P. စိတ်ခံစားမှုမျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေပိုမြန် Oriental တုံ့ပြန်မှုကျလာသော, ဒါပေမယ့်မြင်ကွင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အာရုံကြောများနှင့်အမူအကျင့်အဆင့်ဆင့်မှာအားနည်းစိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှု: တစ်ဦးကတစ်ပြိုင်နက် EEG နှင့်မျက်နှာတွေ့ရစဉ်လေ့လာမှု။ Neuroimage 2016, 124, 931-946 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Linden, DE အဆိုပါ P300: ဦးနှောက်ထဲမှာထုတ်လုပ်နေသည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြထားဘူးအဘယ်မှာရှိသနည်း အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် 2005, 11, 563-576 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Voon, V ကို .; မှဲ့, တီဘီ, BANCA, P ကို ​​.; ပေါ်တာ L ကို .; မောရစ်, L ကို .; မစ်ချယ်, S ကို .; Lapa, TR; Karr, ဂျေ .; Harrison, NA; Potenza, MN; et al ။ အာရုံကြောနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue reactivity ကို၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ PLoS ONE 2014, 9, e102419 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Minnix ဂျေ; Versace, F ကို .; ရော်ဘင်ဆင်, JD; lam, CY; Engelmann, JM; Cui, Y ကို .; Borwn, VL; Cinciripini, pm တွင်ဆေးလိပ်သောက်အတွက်စိတ်ခံစားမှုနှင့်စီးကရက်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ကွဲပြားအမျိုးအစားများကိုတုန့်ပြန်သည့်အနှောင်းပိုင်းအပြုသဘောအလားအလာ (LPP): တစ်ဦးကအကြောင်းအရာနှိုင်းယှဉ်။ int ။ ဂျေ Psychophysiol ။ 2013, 89, 18-25 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Mavratzakis, တစ်ဦးက .; Molloy, E ကို .; စိတ်ခံစားမှုဓါတ်ပုံတွေကိုမှအကျဉ်းချုပ်နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ထိတွေ့နေစဉ်အတွင်း Walla, ထိုထိတ်လန့်တုံ့ပြန်မှု၏ P. Modulation ။ စိတ္ပညာ 2013, 4, 389-395 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
lang, PJ; Bradley, MM; Cuthbert, BN Emotion, အာရုံစူးစိုက်မှု, နှင့်ထိတ်လန့်တုံ့ပြန်မှု။ Psychol ။ ဗျာ 1990, 97, 377-395 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
ပက်ထရစ်, CJ; Bradley, MM; lang, ပြစ်မှုဆိုင်ရာစိတ်အတွက် PJ Emotion: တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်တုံ့ပြန်မှုမော်ဂျူ။ ဂျေပုံမှန်မဟုတ်သော။ Psychol ။ 1993, 102, 82-92 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
လီယွန်, GS, Walla, P ကို ​​.; အာသာ-ကယ်လီ, အမ်လေးနက်တဲ့မျိုးစုံမသန်စွမ်းကလေးများ သိ. ၏တိုးတက်လာသောနည်းလမ်းများဆီသို့: ထိတ်လန့်တုံ့ပြန်မှုမော်ဂျူမိတ်ဆက်ခြင်း။ dev ။ Neurorehabil ။ 2013, 16, 340-344 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Ehrlichman, H ကို .; ဘရောင်း Kuhl, S ကို .; Zhu, ဂျေ .; Wrrenburg, အက်စ်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်တစ်ဦးအကြား-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းအတွက်သာယာသောနှင့်မနှစ်မြို့ဖွယ်အနံ့အားဖြင့်မော်ဂျူ reflex ။ Psychophysiology 1997, 34, 726-729 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Dawson, ME, Hazlett, EA ၏, Filion, DL; Nuechterlein, KH; Schell, Am အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် schizophrenia: အထိတ်လန့်တုံ့ပြန်မှုများ၏မော်ဂျူချို့တဲ့ခြင်း။ ဂျေပုံမှန်မဟုတ်သော။ Psychol ။ 1993, 102, 633-641 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Grahl, တစ်ဦးက .; Greiner, ဦး .; တစ်ဦးကထိတ်လန့်တုံ့ပြန်မှုမော်ဂျူလေ့လာမှု: Walla, P. Bottle သပုံသဏ္ဍာန်ကျား-တိကျတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှု elicits ။ စိတ္ပညာ 2012, 7, 548-554 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Geiser, M က .; Walla, မြို့ပြအိမ်နီးချင်း-ကိုတစုံတရာတဆင့်ကို virtual လမ်းလျှောက်နေစဉ်အတွင်းစိတ်ခံစားမှု၏ P. ရည်ရွယ်ချက်အစီအမံ။ Apple က။ သိပ္ပံ။ 2011, 1, 1-11 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Walla, P ကို ​​.; Rosser, L ကို .; Scharfenberger, ဂျေ .; Duregger, C ကို .; Bosshard, အက်စ် Emotion ပိုင်ဆိုင်မှု: ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ratings နှင့်သွယ်ဝိုက်တုံ့ပြန်မှုအပေါ်အမျိုးမျိုးသက်ရောက်မှု။ စိတ္ပညာ 2013, 4, 213-216 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Koller, M က .; Walla, P. သတင်းအချက်အလက်စနစ်များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေပြန်ကြားရေးထုတ်ယူခြင်းတိုင်းတာခြင်းနှင့်စားသုံးသူတုန်လှုပ် reflex Modulation သုတေသန-မိတ်ဆက်ခြင်း။ သတင်းအချက်အလက်စနစ်များ, Orlando တွင်, FL, အမေရိကန်, 33-16 ဒီဇင်ဘာလ 19 အပေါ် 2012rd နိုင်ငံတကာညီလာခံ၏တရားစွဲဆိုထားပါတယ်။ [Google Scholar]
Walla, P ကို ​​.; Koller, M က .; Meier, Over-စားသုံးမှုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုနှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားကိုဖွဲ့စည်းခြင်းကိုသိရှိနိုင်ဖို့စားသုံးသူ-ဇီဝနည်းလမ်းများအကြောင်းကြားရန်ဂျေစားသုံးသူ neuroscience ။ တပ်ဦး။ Hum ။ neuroscience ။ 2014, 8, 304 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Walla, P ကို ​​.; Neurols အတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေအပြောင်းအလဲနဲ့တစ်အတိုင်းအတာအဖြစ် reflex Module (SRM) Startle: Koller, အမ် Emotion သင်ကထင်သောအရာကိုမဟုတ်ပါဘူး။ သတင်းအချက်အလက်စနစ်များနှင့်အဖွဲ့ထဲမှာပို့ချချက်မှတ်စုများခုနှစ်တွင်: သတင်းအချက်အလက်စနစ်များနှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံ; Springer အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထုတ်ဝေရေး: Cham, ဆွစ်ဇာလန်, 2015; Volume ကို 10, စစ။ 181-186 ။ [Google Scholar]
Koller, M က .; Walla, P. စားသုံးမှုနှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားတိုင်းတာရန်အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းများကိုဆီသို့: မိတ်ဆက်ခြင်းထိတ်လန့်တုံ့ပြန်မှုမော်ဂျူ။ ဂျေ Agric ။ စားနပ်ရိက္ခာ Ind ။ အဖွဲ့။ 2015, 13, 83-88 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Jansen, DM; Frijda, ရုပ်ရှင်-သွေးဆောင်ကြောက်ရွံ့လိင်စိတ်နိုးထအားဖြင့် acoustic ထိတ်လန့်တုန့်ပြန်၏နယူးဟမ်းရှား Modulation ။ Psychophysiology 1994, 31, 565-571 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Ruiz-Padial, E ကို .; Vila, ဂျေကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်ဝိညာဏ်လူသားတွေအတွက်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ် reflex Modulate မမွငျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 2007, 61, 996-1001 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Kunaharan, S ကို .; Walla, P. လက်တွေ့အာရုံကြောသိပ္ပံ-ဆီသို့အသိပညာပေ Impulse တက်ကြွအပြုအမူအတွက်ပါဝင်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကြည့်ရှုမှုနှိုင်းယှဉ်မဟုတ်သောသတိတစ်ဦးသည် သာ. ကောင်း၏နားလည်မှု။ စိတ္ပညာ 2014, 5, 1963-1966 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Wiederman, မီဂါဝပ်; Whitley, လူ့လိင်အပေါ်သုတေသနဆောင်ရွက်ခြင်းများအတွက်, ဂျူနီယာလက်စွဲစာအုပ် BE; လောရင့် Erlbaum Associates မှ: Mahwah, NJ, USA, 2002 ။ [Google Scholar]
Davidson, RJ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏လေ့လာမှုမှာခုနစ်အပြစ်များကို: အကျိုးသက်ရောက်စေ neuroscience ထံမှမှန်ကန်သော။ ဦးနှောက် Cogn ။ 2003, 52, 129-132 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Koukounas, E ကို .; McCabe, Erotica မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုလွှမ်းမိုးအမတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ခံစားမှု Variables ကို: တစ်ဦးက Psychophysiological စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2001, 30, 393-408 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Walla, P ကို ​​.; Brenner, G .; Koller, အမှတ်တံဆိပ်သဘောထားကိုနှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏အမ်ရည်ရွယ်ချက်အစီအမံ: စျေးကွက်မှသက်ဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှု-related ရှုထောင့်များကိုတွက်ချက်ရန်နည်းလမ်းသစ်တစ်ခု။ PLoS ONE 2011, 6, e26782 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Walla, Magnetoencephalography (Meg) ကပျေါထှနျးခဲ့ P. မဟုတ်သောသတိဦးနှောက်လုပ်ငန်းစဉ်။ Magnetoencephalography ခုနှစ်တွင်; InTech: Rijeka, ခရိုအေးရှား, 2011 ။ [Google Scholar]
Winkielman, P ကို ​​.; Berridge, KC သတိလစ် Emotion ။ Curr ။ dir ။ Psychol ။ သိပ္ပံ။ 2004, 13, 120-123 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Tamietto, M က .; က de Gelder, စိတ်ခံစားမှုအချက်ပြမှုများ၏ non-သတိအမြင်များ၏ခနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောအခြေစိုက်စခန်း။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 2010, 11, 697-709 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
LimeSurvey: တစ်ခုကပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်စစ်တမ်း Tool ကို / LimeSurvey Project မှဟမ်းဘတ်, Gemrnay ။ 2012 ။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါ: http://www.limesurvey.org (1-30 ဇွန်လ 2015 အပေါ်ဝင်ရောက်) ။
Snyder, ဖော်ပြအပြုအမူ၏အမ်ကိုယ်ပိုင်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု။ ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol ။ 1974, 30, 526-537 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Harkness, EL; Mullan, B, .; Blaszczynski, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူစားသုံးသူများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူတွေအကြားအေအသင်းမှ: တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု။ Cyberpsychol ။ ပြုမူနေ။ Soc ။ Netw ။ 2015, 18, 59-71 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
lang, PJ; Bradley, MM; Cuthbert, BN နိုင်ငံတကာကိုထိခိုက်ရုပ်ပုံစနစ် (IAPS): ရုပ်ပုံများနှင့်ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲ၏အကျိုးသက်ရောက်စေ Ratings အဖွဲ့; နည်းပညာဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ A-8; ဖလော်ရီဒါတက္ကသိုလ်မှ: Gainesville, FL, အမေရိကန်, 2008 ။ [Google Scholar]
ဗန် Dongen, NNN; ဗန် Strien, JW; Dijkstra, အနုပညာလက်ရာများကြည့်ရှု၏အခြေအနေတွင် K. Implicit စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်း: သာယာသောနှင့်မနှစ်မြို့ဖွယ်ဓါတ်ပုံတွေကိုတုန့်ပြန် ERP သက်သေအထောက်အထား။ ဦးနှောက် Cogn ။ 2016, 107, 48-54 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Konorski သည်ဦးနှောက်၏ဂျေ Integrated လုပ်ဆောင်ချက်: An Interdisciplinary ချဉ်းကပ်; ချီကာဂို, IL, အမေရိကန်, 1967: ချီကာဂိုစာနယ်ဇင်းတက္ကသိုလ်။ [Google Scholar]
Harper ကို, ကို C .; တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားပြဿနာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဆက်စပ်မှုဆန်းစစ် Hodgins, DC က။ ဂျေပြုမူနေ။ စှဲလမျးသူ။ 2016, 5, 179-191 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Cuthbert, BN; Schupp, HT; Bradley, MM; Birbaumer, N ကို .; အကျိုးသက်ရောက်စေရုပ်ပုံအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက် lang, PJ ဦးနှောက်အလားအလာ: ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ arousal နှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေအစီရင်ခံစာနှင့်အတူ Covariation ။ Biol ။ Psychol ။ 2000, 52, 95-111 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
သဟဇာတ-ဂျုံးစ်, E ကို .; Gable, PA ဆိုပြီး; Peterson, CK စိတ်လှုပ်ရှားမှု-related ဖြစ်ရပ်အတွက်အချိုးမညီတိုကျရိုကျ cortical လှုပ်ရှားမှုများ၏အခန်းကဏ္ဍ: တစ်ဦးကသုံးသပ်မှုများနှင့် update ကို။ Biol ။ Psychol ။ 2010, 84, 451-462 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Hofman, ဃစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏တိုကျရိုကျအကြာတွင်: တစ်ဦးကသမိုင်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ Neth ။ ဂျေ Psychol ။ 2008, 64, 112-118 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Hajcak, G .; MacNamara, တစ်ဦးက .; Olvet, DM Event-related အလားအလာ, စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်း: အရေးပါသောပြန်လည်သုံးသပ်။ dev ။ Neuropsychol ။ 2010, 35, 129-155 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Sarlo, M က .; Übel, S ကို .; Leutgeb, V ကို .; တစ်ခုက ERP လေ့လာမှု: အစားအစာများ၏အစာစားချင်စိတ်တန်ဖိုးကိုလျှော့ချရန်ကြိုးစားနေသည့်အခါ Schienle, အေသိမှု reappraisal ပျက်ကွက်။ Biol ။ Psychol ။ 2013, 94, 507-512 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Hald လူငယ်လိင်ကွဲဒိန်းမတ်လူကြီးများအကြားတွင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအတွက် GM ကကျားကွဲပြားခြားနားမှု။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2006, 35, 577-585 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Kalichman, SC; သက်တမ်းနှင့် HIV ပိုးအန္တရာယ်အပြုအမူကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း: Rompa, ဃလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Sensation ရှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive Scales ။ ဂျေ Pers ။ အကဲဖြတ်ရန်။ 1995, 65, 586-601 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Kraus, S ကို .; Rosenberg က, အိပ်ချ်ဒီညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံတဏှာမေးခွန်းလွှာ: Psychometric Properties ကို။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2014, 43, 451-462 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Hald, GM က; Malamuth, ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုမိုင်ကိုယ်ပိုင်ရိပ်မိဆိုးကျိုးများ။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2008, 37, 614-625 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Rugg, MD, မာကု, RE; Walla, P ကို ​​.; Schloerscheidt, Am, Birch, CS; အယ်လန်, သွယ်ဝိုက်နှင့်အကဲဆတ်သောမှတ်ဥာဏ်၏အာရုံကြောဆက်စပ်၏ K. Dissociation ။ သဘာဝ 1998, 392, 595-598 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed
©စာရေးသူအားဖြင့် 2017 ။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူ MDPI, ဘေဆယ်, ဆွစ်ဇာလန်။ ဤဆောင်းပါးတွင်အဆိုပါကို Creative Commons Attribution (CC ကို BY) လိုင်စင် (၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများအောက်တွင်ဖြန့်ဝေကာပွင့်လင်း access ကိုဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည် http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).